June 2012 | ကမ်းလက်
ဘာပဲပြောပြော မြန်မီး တော့ မကြိုက်
in Politics, ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 6/30/2012 - No comments
Mr Song ဆိုတဲ့ တရုတ် တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူက တေး သီချင်း ထုတ်လုပ်တဲ့သူ တဲ့။ ဟောင်ကောင်မှာလည်း ရှိတယ်၊ Mr To Ba တဲ့ ( တူးဘား လို့ အသံထွက် ) သူက ကား ပြင်ဆရာ။ အဲသလို နာမည်တွေနဲ့ လူတွေ တွေ့ဆုံ ရတာဟာ အံ့ဩ စရာ မဟုတ်ဘူးလား။
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်မှတ်ထိုးဖို့ အချိန်ဆွဲနေတဲ့ ရီပတ်ဘလီကန် အမတ် နှစ်ယောက် ရှိဖူးတယ်။ သူတို့ နာမည်တွေက Doolittle နဲ့ De Lay တဲ့။ ( Do little ) ။ ယူကေ က ဦးနှောက် အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ နာမည်က Mr Brain။ ကမ္ဘာကျော် ပြေးခုန်ပစ် အားကစားသမား ရှိသေးတယ်၊ Stepanova တဲ့။ အစ္စရေးက တင်းနစ်ကစားသမား အမျိုးသမီး နာမည်ကလည်း Smashanova တဲ့။ အမေရိကန်၊ တက္ကဆက် က သုဘရာဇာ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ နာမည်ကလည်း Boxwell Brothers တဲ့။ ( Box-well ကောင်းကောင်း ထုတ်ပိုးတတ်တယ်)။ Dr Payne လို့ ခေါ်တဲ့ သွား ဆရာဝန်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ အမေရိကန် သွား ဆရာဝန် ကတော့ Dr. Chip Silvertooth တဲ့။
အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာ Butt ဆိုတဲ့ နာမည်က ပေးတာများပေမယ့် ကမ္ဘာ မှာလည်း ဒေါက်တာ Butt တွေ အများကြီး။ တစ်ချို့ဆိုရင် စာရိတ္တ ပြုပြင်ရေး သမားတွေ။ အမေရိက မှာ ရှိတဲ့ တရုတ် မျက်စိ အထူးကု ဆရာဝန်က Dr. Look ။ ကောလိပ်က ပါမောက္ခ တစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကတော့ သူတို့မို့ ပေးရဲတယ်၊ Dr. Failor တဲ့။ အထူးခြားဆုံးက အာမခံ ကုမ္ပဏီက အရောင်း စာရေးရဲ့ နာမည်။ ကြားဖူအောင် မှတ်ထားကြ။ Justin Case တဲ့။ ( Just in case )
ဒါတွေဟာ တိုက်ဆိုင်မှု သက်သက်ပဲလား။
မန်ချက်စတာ တက္ကသိုလ်က သုတေသန ပညာရှင် Jen Hunt ကတော့ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။ New Science မဂ္ဂဇင်းကလည်း Nominative Determinism ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ နဲ့အတူ နာမည်တွေက သူတို့ အလုပ်အကိုင်တွေ အပေါ်သက်ရောက်မှု ရှိကောင်း ရှိနိုင်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့က အခုမှ လေ့လာပေမယ့် အာရှကတော့ နာမည်က လူ အပေါ် လွှမ်းမိုးမှု ရှိတယ် ဆိုတာ ယုံကြည်ခဲ့ကြတာ ရှေး ပဝေသဏီ ကတည်း ကပါ။ တောင် အာရှက နာမည်တွေကိုကြည့်။ ဘီယာနဲ့ အဖျော် ယမကာ ရောင်းတဲ့လူ၊ သူ့ နာမည်က Bottlewalla ။ (walla ဆိုတာ job )။ ကား အရောင်း စာရေး နာမည်က Tyrewalla။ ထီး ရောင်း တဲ့လူက Brollywalla။ နောက် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်က Jasmine Sodabottlepopbottleopenerwalla တဲ့။ နာမည် ရှည်လို့ မဖြတ်လိုက်ကြပါနဲ့။ အဲဒါ တစ်လုံးတည်း၊ သူမရဲ့ ဆန်း နိမ်း ပါ။ သူမ အဖိုး၊ အဖွားတွေ ဘာ လုပ်ကိုင်ကြတယ် ဆိုတာ မပြောတော့ဘူး။ ဟောင်ကောင်မှာ ထူးထူး ခြားခြား နာမည် နှစ်ခု ရှိသေးတယ်။ Truly Man. He Man တဲ့။ အဲဒါ တကယ့်ကို နွဲ့နွဲ့ နှောင်းနှောင်း မိန်းကလေး နှစ်ယောက်။ အမေရိကန် မလေး ရဲ့ နာမည်ကို ကြည့်ဦး၊ Tiny Bimbo တဲ့။ ကောင်ကလေး ကို ကျတော့ Ferlon တဲ့။ ( ဒါလေးတွေက မစ္စတာ ဂျင်မ် ဆီက ယူထားတာပါ။)
ငါလား ငါ့ အမေလား
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဂါနာ နွယ်ဖွား မန်စီးတီး နဲ့ အီတလီတိုက်စစ်မှူး ဘာလိုတယ်လီ ဟာ အမြဲတမ်း တစ်ခု မဟုတ် ပြဿနာရှိနေတတ်တယ်။ ထားပါတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီဦးတုန်းက မန် ယူနိုက်တက်ကို ဂိုးသွင်း အပြီး သူ့ ရင်ဘတ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာကို လှန်ပြတယ်။ "Why I always me " တဲ့။ သူ ဘာပြောပြော မန် စီးတီး ပရိသတ်ကတော့ မန် ယူနိုက်တက်ကို သွင်းတဲ့ ဂိုးပဲ မြင်ကြပါတယ်။ ပျော်မဆုံး မော်မဆုံး။ အခု လာပြန်ပြီ။ "These goals for you, Mum" တဲ့။ ရင်ဘတ်မှာတော့ ရေးမထားပါဘူး။ Why I always me နဲ့ စာရင်တော့ These goals for you, Mum က ပရိတ် ရဲ့ ရင်ကို ပိုထိတယ်။ ဖေးဘရိတ် ဂျာမဏီ ကို မထင်မှတ်တဲ့ ဂိုး နှစ်ဂိုး နဲ့ မြူးနစ် ပြန်ပို့ လိုက်တယ်။ အီတလီက စပိန် နဲ့ ဗိုလ်လု ပွဲကို စောင့်နေလေရဲ့။ ပြောချင်တာက These goals for you, Mum ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Dad ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အီတလီ ပရိသတ် သိတာကတော့ သူသွင်း တဲ့ ဂိုး နှစ်ဂိုး ပါဘဲ။
ဘားမား လား၊ မြန်မာလား။
လာပြန်ပြီ နောက် ကိစ္စတစ်ခု၊ ဒါကမှ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာ။ ဘားမား လား၊ မြန်မာလား။ အော်ဖစ်ရှယ်လီ ပြောင်းထားပေမယ့် အရှေ့ အုပ်စုက မြန်မာပြီး အနောက်အုပ်စုကတော့ ဘားမား ပဲ။ စစ်တပ်က မြန်မာ၊ NLD က ဘားမား။ အဲဒီအထဲမှာ အပါးနပ်ဆုံးက ဟီလာရီ ကလင်တန်။ ဘားမား လည်းမခေါ် မြန်မာ လည်း မသုံး "This country" တဲ့။ ဒီပလိုမက်တစ် ပိုင်တယ်။ လှတယ်၊ မဆိုးဘူး။ ပြဿနာတော့ ရှိတယ်။ နာမည်ပြောင်းတာ ဝါသနာ ပါတဲ့ နိုင်ငံ ဆိုတော့ နောက် အစိုးရ တက်လာရင် "That country " လို့ ပြောင်းလိုက်မှ ဒုက္ခ။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက ဒါကိုမသိဘူး။ ။
ဘယ်လို ပြောင်းပြောင်း အဆိုးဆုံးက မြန်မီး။ စင်ကာပူက ဘယ်က ခွင့်ပြုချက် ယူပြီး သုံးထားတာလဲ မသိဘူး။ မြန်မီး တဲ့။ အူကြောင်ကြောင် နဲ့၊ လုံးဝ မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး၊ စင်ကာပူ နဲ့ မကင်းနိုင်တော့ မြန်မီး နေရတာပဲ။ ဘုရားက ရယ်စရာ မမိန့်တတ်ဘူး ဆိုပေမယ့် ပြုံးစရာလေးတွေတော့ တစ်ခါ တစ်ခါ မိန့်တော်မူတတ်တယ်။ နာမသိဒ္ဓိဇာတ် ထဲမှာ ပါ။ ဦးသက်ရှည်ကြီး စောစောသေ၊ ဒေါ်ချမ်းသာကြီး မွဲပြာကျ။ ကိုဗလ က ပိန်တာရိုး တဲ့။ မိန့်မယ်သာ မိန့်တာ ဘုရားရှင်က အရှင်မြတ်ရဲ့ အမည်ကိုမေးတော့ "ဇိန" တဲ့။
ဒါကြောင့် Why I always me ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ These goals for you, Mum ပဲ ဆိုဆို လိုနေတာကတော့ အနိုင် ဂိုး ပါ။
အဲ ဒါနဲ့ မြန်မီး တော့ မကြိုက်ဘူး၊ ပြောပေးကြပါအုံး (စာလုံးမဲကြီးနဲ့)။ ။
မျှော်နေသူနဲ့ ပြန်ချင်သူတို့ မတွေ့သမျှရယ်…
in Politics, ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 6/29/2012 - No comments
မနှစ်က အိန္ဒိယကို သွားတော့ အင်ဒီရာဂန္ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်ကွင်းထဲကနေ ထွက်ထွက်ချင်းပဲ ဖုန်းထဲကို မက်ဆေ့ဂ်ျတစ်ခု ရောက်လာတယ်။ အဲဒီမက်ဆေ့ဂ်ျက ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ (အထူးသဖြင့်တော့ အမေရိကန်ပေါ့) အခြေချနေထိုင်နေကြတဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အိန္ဒိယန်း ပညာတတ်တွေကို စာရင်းပြုစုထားပြီး မွေးရပ်မြေကို မေ့နေကြတဲ့အတွက် ခပ်နာနာလေး ဝေဖန်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ဂ်ျပါ။ သူတို့ ကောက်ယူထားတဲ့ စာရင်းဇယားများအရ နာဆာရဲ့ နည်းပညာရှင်တွေထဲမှာ အိန္ဒိယန်းလူမျိုး (၁၂) ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပြီး အမေရိကရဲ့ ဒေါက်တာတွေထဲမှာ (၁၆) ရာခိုင်နှုန်းက အိန္ဒိယန်းတွေ ဖြစ်ပါသတဲ့။
သူတို့ ကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းက ဘယ်လောက်ခိုင်မာသလဲဆိုတာ မသိရပေမယ့် အိန္ဒိယန်းတွေ အိုင်တီမှာ တော်တာ ကတော့ လူတိုင်း သိနေတဲ့ ကိစ္စပါ။
အဲဒီမက်ဆေ့ဂ်ျလေးက “ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ပညာတွေတတ်ပြီး ရူးကြောင်ကြောင် (ခပ်ရိုင်းရိုင်း Stupid လို့ကို သုံးထားပါတယ်) ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာ အိန္ဒိယကို ပြန်လာကြမယ်ဆိုရင် နယူးဒေလီဟာ နယူးယောက်ကို အချိန်မရွေး စိန်ခေါ်နိုင်တယ်” လို့ အဆုံးသတ် ထားပါတယ်။
အိန္ဒိယဆိုတာကလည်း (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိတဲ့လူတွေက ပိုက်ဆံထားစရာ မရှိလောက်အောင် ချမ်းသာပြီး ကျန်တဲ့ (၈၅) ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ကုန်းကောက်စရာ မရှိလောက်အောင် ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံပါ။ အဲ့သလိုပါပဲ၊ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ ရှိတဲ့လူတွေက ပညာတွေ သိပ်တော်နေကြပေမယ့် ကျန်တဲ့ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ အခြေခံပညာသင်ဖို့တောင် ရုန်းကန်နေကြရဆဲပါပဲ။
တရုတ်ပြည်ကလည်း ဒီကိစ္စအတွက် တစ်စခန်း ထလာပြန်ပါတယ်။ အမေရိကမှာ အခြေချ နေထိုင်နေကြတဲ့ ပညာတတ် တရုတ်လူမျိုးတွေ တရုတ်ပြည်ကြီးထဲ ပြန်လာဖို့ အရေးတကြီး စည်းရုံးရေးတွေ လုပ်နေတဲ့အကြောင်း ဒီနေ့ (၂၄၊ ၀၅၊ ၂၀၁၂) ထုတ် စထရိတ်တိုင်း သတင်းစာမှာ ဖတ်လိုက်ရပြန်တယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို အစပျိုးခဲ့တာ နှစ်နှစ်ကျော် ကြာပြီလို့လဲ ဆိုထားပါတယ်။
နယူးဒေလီရဲ့ အိပ်မက်မျိုးလိုပါပဲ၊ ပီကင်းကလည်း တရုတ်လူမျိုးပညာရှင်တွေ အားလုံးသာ ပြန်လာရင် ပီကင်းဟာ နယူးယောက်ကို အချိန်မရွေး စိန်ခေါ်နိုင်မယ်ပေါ့။
ဒီသတင်းနှစ်ခုကို ဆက်စပ်မိပြီး တစ်ခါက နိုဘယ်လ်ဆုရ ဂျပန်ဆရာဝန်တစ်ယောက် ပြောတာကို သတိရမိတယ်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နိုဘယ်လ်ဆု ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံး ဂုဏ်ယူမဆုံး ဖြစ်နေကြချိန်မှာ အဲ့ဒီဆရာဝန်ရဲ့ စကားကြောင့် အားလုံး အောင့်သက်သက် ဖြစ်သွားကြရတယ်။ သူပြောတာက “သူသာ အမေရိကတက္ကသိုလ်မှာ တက်ပြီး ပညာသင်ကြားခွင့် မရခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီနိုဘယ်လ်ဆုလည်း ရနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး” တဲ့။
နိုင်ငံတစ်ခုကို သယံဇာတနဲ့ တည်ဆောက်တာထက် စာသင်ခန်းမထဲမှာ တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံအသိ နောက်ကျခဲ့ကြတဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေဟာ အခုတော့ အမြင်မှန်တွေ ရလာပြီး စာသင်ခန်းထဲက ထွက်ပြေးသွားတဲ့ နိုင်ငံတော်အသစ်တွေဆီ အသည်းအမည်း လိုက်ဖမ်းနေကြတယ်။ ကျွန်တော်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရေးဖူးတယ်။ ပီကင်းနဲ့ နယူးဒေလီဟာ နယူးယောက်ကို ဘယ်တော့မှ ကျော်တက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့။ အကြောင်းက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ နယူးယောက်က ပီကင်းနဲ့ နယူးဒေလီ ယဉ်ကျေးမှုကို မွေးစားလိုက်နိုင်ပြီး ပီကင်းနဲ့ နယူးဒေလီက နယူးယောက် ယဉ်ကျေးမှုကို မွေးစားဖို့ ကြိုးစားကြမှာ မဟုတ်သေးလို့ပါ။
အာရှထဲက တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်း စာသင်ခန်းထဲက ထွက်ပြေးသွားတဲ့ နိုင်ငံတော်သစ်ကို လိုက်ဖမ်းဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ သမ္မတကြီးကို ရင်ထဲကနေ နှစ်နှစ်ကာကာ ကျေးဇူးတင် မိပါရဲ့။
ပညာတတ် မြန်မာလူမျိုးတွေ မြန်မာပြည်ထဲ ပြန်ဝင်လာပြီး နိုင်ငံတော် ထူထောင်ရာမှာ တစ်တပ်တစ်အား ပူပေါင်း ပါဝင်ကြဖို့ သမ္မတကြီးက ဖိတ်ခေါ်တယ်။
ကျွန်တော့်အထင် ပြောရရင် မြန်မာလူမျိုး တော်တော်များများဟာ မျိုးချစ်စိတ် သိပ်ပြင်းထန်ကြပါတယ်။ ပါးစပ်ပြောလား၊ တကယ်လားဆိုတာ ခွဲခြားရ ခက်လှပေမယ့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ နိုင်ငံတော်ဆီ ခြေစုံပစ်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားသူတွေ အများအပြား ရှိနေပါတယ်။
သေချာတဲ့ စာရင်းဇယားကတော့ စင်္ကာပူလူမျိုးအဖြစ် ခံယူကြတဲ့အထဲမှာ မြန်မာတွေဟာ ရာခိုင်နှုန်း အနည်းဆုံးထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ပညာတတ် မြန်မာတွေဟာ အမြဲနေထိုင်ခွင့် (ပီအာ) ကိုသာ ယူပြီး ပီအာကနေ စီတီဇင်ပြောင်းသူဟာ (၁၂) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိတယ်လို့ မနှစ်က သိခဲ့ရပါတယ်။ စီတီဇင်ပြောင်းလိုက်ရင် ရလာမယ့် အခွင့်အရေးတွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ပြောင်းလဲလာမယ့် နိုင်ငံတော်ဆီ မျက်စောင်းထိုးနေကြတဲ့ မြန်မာတွေ သိပ်မနည်းလှပါဘူး။
တရုတ်လူမျိုးတွေကတော့ သူများနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူကြတဲ့အထဲမှာ ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိကြပါတယ်။ စင်္ကာပူလူမျိုးအဖြစ် ခံယူကြတဲ့အထဲမှာ တရုတ်ပြည်မကလူတွေဟာ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းတောင် ကျော်နေပါသတဲ့။ တရုတ်လောက် မများလှပေမယ့် အိန္ဒိယန်းတွေကလည်း သူများနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူဖို့ မြန်မာတွေလောက် ကပ်စေးမနည်းကြပါဘူး။
တရုတ်၊ အိန္ဒိယန်းတွေနဲ့ နှုန်းယှည်ကြည့်ရင် မြန်မာတွေရဲ့ နိုင်ငံချစ်စိတ်က ပိုအားကောင်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သမ္မတကြီးအတွက် မျှော်လင့်ချက်လည်း သိပ်ရှိပါတယ်။ (၈၈) ကာလမတိုင်မီကတော့ တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက် စလောက်ပဲ နိုင်ငံတော်က ဆုံးရှုံးခဲ့တာပါ။ (၈၈) ပြီးတဲ့နောက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာက စာသင်ခန်းတွေ အခန်းလိုက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရ ပါတော့တယ်။ (၈၈) နောက်ပိုင်း မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဦးနှောက်တွေက အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့မို့ တော်တော် ကြေကွဲ စရာ ကောင်းပါတယ်။
စာရင်းဇယားနဲ့ အတိအကျ မတင်ပြနိုင်ပေမယ့် (၈၈) မျိုးဆက် လူလတ်တွေဟာ လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးတွေ ဖြစ်နေတာ တော်တော်များများ တွေ့ရတယ်။ အဆင်မပြေတဲ့ နိုင်ငံတော်ကို သူတို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပံ့ပိုးရင်းနဲ့ သူတို့ကိုယ်ပိုင် မိသားစုဘဝလေးတွေ တည်ဆောက်ဖို့တောင် မသိချင်ယောင် ဆောင်ထားရတဲ့ မျိုးဆက်တွေပါ။
အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကို စည်းရုံးဖို့ ဒေါ်စု၊ အန်တီစု၊ အမေစု မပါလို့တော့ မရပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ခပ်ဖျော့ဖျော့ အိပ်မက်တွေကို ဒေါ်စုဆီမှာ ယုံယုံကြည်ကြည် ပေးထားရင်း ခရီးဆက်နေကြပါတယ်။ ဒေါ်စုကို အမှီပြုပြီး အနောက်က ဝင်လာမယ့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထက် ဒေါ်စုကို အမှီပြုပြီး ပြည်တွင်းထဲ ဝင်လာကြမယ့် (၈၈) ဦးနှောက်တွေကို ပိုပြီး တန်ဖိုးထားတယ်လို့ ပြောရင် ကျွန်တော့်ကိုများ ဝိုင်းဆဲကြမလား မသိဘူး။ (၈၈) မျိုးဆက်ဟာ အခုဆိုရင် (၄၀) ကျော်တွေပါ။ ပညာရှိတယ်၊ အရွယ်ရှိတယ်၊ အတွေ့အကြုံရှိတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ သူ့နယ်ပယ်နဲ့သူ အထိုက်အလျောက် နေရာရထားသူတွေ ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ နည်းပညာအိုင်တီဆိုင်ရာတွေမှာပါ။
နောက်ပြီး တန်းဖို့ ဖြတ်မရတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အမြတ်က နောက်လူငယ်တွေ လေးစားတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့လို လူတွေ ရှိနေခြင်းပဲ။ လူငယ်တွေကို ပြုပြင်ပေးရာမှာ သူတို့ဟာ အဓိက မောင်းနှင်အားတွေ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
တရုတ်ကလည်း တရုတ်ပညာရှင်တွေကို ပြန်လာဖို့ခေါ်၊ အိန္ဒိယကလည်း ခေါ်၊ မြန်မာကလည်း ခေါ်။ ဒီသုံးဦးထဲမှာ မြန်မာဟာ မျှော်လင့်ချက် အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုရင် တရုတ်၊ အိန္ဒိယန်းတွေက သူတို့ သဘောနဲ့သူတို့ ထွက်သွားကြတာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာတွေကတော့ အခြေအနေအရ ထွက်ခဲ့ရတာ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ သလို နိုင်ငံခြားသား ခံယူသွားတဲ့ မြန်မာအရေအတွက်ဟာ သူများထက် နည်းနေတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဓိက ပြဿနာတစ်ခုတော့ ရှိတယ်။
ဆိုပါတော့၊ NUS မှာ၊ အောက်စ်ဖို့ဒ်မှာ၊ မန်ဆာချူးဆက်အင်စတီကျုမှာ အင်ဂျင်နီယာပညာနဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ ယူထားတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်၊ သူ့ကို မြန်မာပြည်က အလုပ်ပေးမထားနိုင်ဘူး။ သူသင်ထားတဲ့ ပညာရပ်တွေကို အသုံးချနိုင်ဖို့ မြန်မာပြည်က အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး။ သူ့အယူအဆနဲ့ ပြည်တွင်းက အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ အယူအဆတွေ တူနေမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကနေ အင်တာနက်ဆိုင်ရာ၊ စတဲလိုက်ဆိုင်ရာ ဒေါက်တာဘွဲ့ ရထားတဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက်၊ သူ့အတွက်လည်း မြန်မာပြည်က အဆင်သင့် သိပ်မဖြစ်သေးဘူး။ မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာ သူသင်ထားတဲ့ ပညာရပ်ရဲ့ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက် သုံးရင်ကိုပဲ ရနေပြီ။ နိုင်ငံတော်ဟာ သူ့ကိုလည်း ရာနှုန်းပြည့် အသုံးမချနိုင်ပြန်ဘူး။
ပြီးတော့ အော်ဒစ် - စာရင်းစစ်ပညာ၊ မြန်မာပြည်မှာ အဓိက အားနည်းတာက အိုင်တီနဲ့ စာရင်းစစ် ပညာတဲ့။ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေက ကျောင်းပြီးထားတဲ့ စာရင်းစစ်ပညာရှင်တွေအတွက် စနစ်ကျတဲ့အလုပ် ပြည်တွင်း ထဲမှာ ရှိကို မရှိသေးဘူး။ ထားပါတော့ - ဒါဆိုရင် ဒီပြဿနာက မုန့်လုံး စက္ကူကပ် ဖြစ်တော့မယ်။ နိုင်ငံတော်က ပညာရှင်တွေကို ပြန်ခေါ်တယ်။ ပညာရှင်တွေကလည်း ပြန်လာချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်က သူတို့နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အလုပ်ကို ဖန်တီး မပေးနိုင်ဘူး။ ဒီလို ပညာရှင်တွေ ပြန်ဝင်မလာဘူးဆိုရင် ဒီလို အလုပ်တွေ ဖန်တီးပေးဖို့ အစိုးရမှာလည်း အခက်တွေ့နေလိမ့်မယ်။ ဒါဆို ဘယ်လို ကွန်ပရိုမိုက် (ဇ်) လုပ်ကြမလဲ။ မြန်မာပညာရှင်တွေ ပြန်မလာရင် နိုင်ငံခြား ပညာရှင်တွေရဲ့ အကူအညီ ယူကြရတော့မယ်။ ဒါဆိုရင် မလိုအပ်တဲ့ နစ်နာမှုတွေ ဖြစ်တော့မယ်။
ကျွန်တော့်ဝန်းကျင်က အင်ဂျင်နီယာနှစ်ယောက်အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်က မြန်မာဖြစ် ပြီး နောက်တစ်ယောက်က စင်ကာပိုရီးယန်းပါ။ ဘွဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေကြည့်ရင် မြန်မာလူမျိုး အင်ဂျင်နီယာရဲ့တက္ကသိုလ်က အပြတ်အသတ် သာတယ်။
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာက စင်ကာပူချန်ဂီလေဆိပ်မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး စင်ကာပိုရီးယန်း အင်ဂျင်နီယာက ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှာ လုပ်တယ်။ စင်္ကာပူက မြန်မာအင်ဂျင်နီယာကို ဒေါ်လာလေးထောင်လောက်နဲ့ ခပ်နှိမ်နှိမ်ပေးပြီး ခိုင်းတယ်။ မြန်မာက စင်ကာပိုရီးယန်း အင်ဂျင်နီယာဆိုပြီး ဈေးမြင့်မြင့်ပေးပြီး ခေါ်ရတယ်။ လူမှုရေးရော ငွေရော ကျွန်တော်တို့ ရှုံးတယ်။
နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရာမှာ အစိုးရဘက်ကရော ပညာရှင်တွေဘက်ကပါ အလျော့အတင်း လုပ်စရာတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ပညာရှင်တွေဘက်ကလည်း လုံးဝပြည့်စုံမယ့် အနေအထားကို မစောင့်ဘဲ ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲမှုထဲကို အနင့်နာခံ စီးမျောမယ်ဆိုရင် ...
အစိုးရဘက်ကလည်း မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ပညာရှင်တွေဟာ ငွေကို အရေးမစိုက်ပေမယ့် ဘာမှ မသိတဲ့ လူတစ်ယောက်က လက်ညိုးထိုး ခိုင်းမှာကိုတော့ ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ လက်ခံထားရင် ...
မျှော်နေသူနဲ့ ပြန်ချင်သူတို့ တွေ့ဆုံနိုင်ပါတယ်။
ချယ်ရီပင်အောက်မှာ ဆုံကြပါစို့လား ... နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ ရောင်းရင်းတို့ ...
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး, အမှတ်တရ - on 6/28/2012 - No comments
မလင်းလက်တော့တဲ့ ကြယ်များ အကြောင်း"
နိမိတ်ပုံတွေ ယောက်ယက်ခတ်နေတဲ့ မောင်မောင် ဇော်လတ် ရဲ့ ဒီ စာသားလေး နှစ်ကြောင်း ကို လေးဖြူက ကွဲအက်အက် ငြီးတွားလိုက်တော့ ...
ကြယ်စင်ဟာ အမှောင်ကို ရှက်ရွံ့တတ်သလား။
ဟင့်အင်း။ အမှောင် သက်သက်ကြောင့် တော့ သိက္ခာနဲ့ ကြယ်စင်ဟာ
နောက်ဆုတ်ဖို့ အကြောင်း မလုံလောက်ပါဘူး။ မိုးတိမ်တွေ ကြောင့်လား၊
အခြား အကြောင်းတရားတွေကြောင့်လား။ မလင်းလက်တော့ ဘူးတဲ့ ။
ဝေဝါးခွင့် မရလောက်အောင် လေးဖြူက ဆက်ပြီ ငြီးတွားတယ်
စမ်းချောင်းနဲ့ ရေပွက်လေး အကြောင်း" တဲ့ ။
ကိုနေဝင်း တို့၊ ကိုတိုကြီး တို့ မဇ္ဈိမလှိုင်း ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ ၇၀ နဲ့ ၈၀ တွေမှာ နေမင်း ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ ထပ်တလဲလဲ ထင်ဟပ်စေသလို (ဥပမာ နေဝင်ညကို ကူးဖြတ်ပြီးမှ.....နေမင်း ပြုံးမယ့် နေ့ စသည် ...)
လေးဖြူကတော့ လမင်းတွေ၊ ပင်လယ်တွေနဲ့ သူ့ ဂီတခရီးကို မွေးမြူခဲ့တယ်။ ကန္တာရ လမင်း၊ ပင်လယ်အော်သံ တဲ့။ သူ့ရဲ့ ပါဝါ ၅၄ ကတော့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဆီ လက်ညှိုး တည့်တည့် ထိုးနေသလိုမို့ ၅၄ ကတော့ကျန်းမရေး ကောင်းခဲ့ဟန်မတူ ဘူး။ ပါဝါ တဲ့။ လမ်းမှာ ကြွေဆုံးသွားခဲ့တယ်။
အခု သူ ထပ်ပြောနေပြန်တယ်။ ပင်လယ်ရောက် အကုန်ကွယ်ပျောက် တဲ့။
ပင်လယ် ဆိုတာ ဆားငန် ရေတွေ ဝါးမြိုထားတဲ့ အဆုံးမရှိရေပြင် ဖြစ်နိုင်သလို တစ်ထွာစာ လူ့ဝမ်းဗိုက်ဟာလည်း သမုဒ္ဒရာ ပါပဲ။
သူတို့လို အနုပညာရှင်တွေဟာ ရေငန်အကြောင်းတော့ ပြောနေကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
စ မိတဲ့ အတွေးကို မောင်မောင်ဇော်လတ် က အနားယူခွင့် ပေးမထားဘူး။
"စမ်းချောင်းနဲ့ ရေပွက်လေး အကြောင်း" တဲ့။
ပင်လယ်ရောက် အကုန်ကွယ်ပျောက် တာ စမ်းချောင်း၊
ရက်ရက်စက်စက် ဆက်ပြောလိုက်တာက ရေပွက်လေး တဲ့။
ဘယ်သူ ရေပွက်လည်း၊ ဘယ်သူ ရဲ့ ရေပွက်လည်း ......
"လေထုထဲ ပြယ်ကာပျက် ပန်းပွင့်များရဲ့ ရနံ့ များ အကြောင်း"
ပန်းရနံ့ဟာ လေထဲမှာ ပျံ့တတ်သလား၊ ပျက်တတ်သလား။ ရီယယ်လစ်စတစ် သမားကို ခပ်တင်းတင်း ငြင်းဆိုထားတယ်။
ပန်းရနံ့ ဟာ လေညာ ကို မသွားဆိုတဲ့ စကား လား။ ဒါဆို လေညာ အရပ်က ဘယ်မှာ လဲ....
ဒီအတွေးကို လေးဖြူက ကွဲအက်အက်အသံနဲ့ တရွတ်ဆွဲ ခေါ်သွားပြန်ရော
"အချိန်တွေထဲ အကုန်ပြိုလဲ ထားခဲရမယ့် အတိတ်များ အကြောင်း" တဲ့။
လေ အစုန်မှာ ပျံ့ဦးတော့ တစ်စစီ ကွဲလွင့် သွားရတဲ့ ဒီ ရနံ့ဟာ ဝေးကွာခြင်း နဲ့အတူ ပျက်လွင့် ခြင်းပါ ခေါ်ဆောင် သွားခဲ့တယ်။ အချိန်တွေထဲ ပြိုလဲရင်း နေရစ်တော့မယ် အတိတ်များ။
သူ ဟာ ငြီးတွားရုံတင် မကတော့ဘဲ အလိုမကျ၊ အပြစ်တင်သံ ပါ ခပ်ဝါးဝါး စွက်လာတယ်။
"တိုးတိုးလေး ကြားတယ် အသံများဟာ ကြေကွဲ လို့
တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ သိနားလည် ငိုကြွေးဖို့ " တဲ့။
ကြေကွဲနေတဲ့ အသံတွေ။ တိုးတိုးလေး။ ဘာဖြစ်လို့ ကျယ်လောင်စွာ မကြေကွဲ ကြတာလဲ။ သူတို့ ဘာမှ မပြောခဲ့ကြဘူး။
ကျယ်လောင်စွာ ကျေကွဲခွင့် မရှိတာလား။ သူတို့ ဘာမှ မပြောခဲ့ကြဘူး။
ရအောင် ကြေကွဲကြမယ် ဆိုရင်ကော၊ သူတို့ ဘာမှ မပြောခဲ့ကြဘူး။
တိတ်တ်ိတ်လေး ငိုကြွေးဖို့ပဲ သိတော့သတဲ့။ Suffer in silence ကို သူ ပြောခဲ့တာ။
ကြီးလွန်းတဲ့ အားကိုလား၊ နည်းလွန်းတဲ့ အားကိုလား။
ရက်စက်လွန်းတဲ့ မြေခွေးကိုလား၊ နူးညံ့လွန်းတဲ့ သိုး ကိုလား။ သူတို့ ဘာမှ မပြောခဲ့ကြဘူး။
သူ့ရဲ့ ကန္တာရလမင်း အိပ်မက်ရှည်ကိုတော့ ငြီးတွားခြင်း အငွေ့အသက် တစ်ချို့ နဲ့ အသက် ပြန်သွင်းသွားခဲ့တယ်။
"မရေရာဘူး မသေချာဘူး မပြီးဆုံး ဘူး...
မသေချာဘူး မရေရာဘူး မပြီးဆုံး ဘူး...
မထင်နိုင်ဘူး မမြင်နိုင်ဘူး ဘာမှ မရှိဘူး...
ဟူး... ရပ်တန့်လို့ မရ ဘူး..." တဲ့။
ဟုတ်တယ်။ မရေရာပေမယ့် ရပ်တန့်လို့ မရဘူး။
ပန်းခရမ်းပြာတို့၊ လွန်ခဲသော နေ့ တို့ ခပ်ဝါးဝါး ဝေးလွင့်စဉ်မှာ လေးဖြူရဲ့ ပင်လယ်အော်သံ (မရေရာဘူး) ဟာ အကျယ်လောင်ဆုံး ကြားလိုက်ရတဲ့ ရင်ခတ်သံ စစ်စစ်ပါပဲ။
ကျနော်တို့ ၈ လ ပြည့် အတွက် ရင် အထိဆုံး ကိုလေးဖြူရဲ့ မရေရာဘူး ကို ပုဂ္ဂလိက ဆန်ဆန် ခံစားမိပါတယ်။
in ပြုံးစိစိ, လှည့်ကြည့်မိတဲ့ ထောင့်ချိုးများ, ခေတ်သစ်ပုံပြင် - on 6/27/2012 - No comments
အင်း။ ဟို ပါလီမန်အမတ် နိုဘယ်လ်ဆု သွားယူမလို့ ဆိုပြီး ထွက်သွားလိုက်တာ ဥရောပမက ကမ္ဘာပါ ပြဲပြဲစင်နေရော။ ငါ့ကိုတောင် အင်္ဂလန်က ဖိတ်အုံးမတဲ့။ အင်း ဖိတ်တော့လည်း ကြွရသေးသပ။ သူမ စကားပြော မမှားပါစေနဲ့ လို့သာ ဆုတောင်းရပေတော့မယ်။ သူ့ မိန့်ခွန်းထဲ ထည့်ပြီး ငါ့ကို ကျေဇူးတင်ဖော်တော့ ရရှာသားပဲ။ အင်းလေ သူလည်း ငါ့ အခြေအနေကို သဘောပေါက် မှာပါ။
နောက် ပြဿနာက မနာလို တိုရှည် ပြည်တွင်းက ပါလီမန် အမတ်မတွေ။ သူတို့ကလည်း တောင်ပြော မြောက်ပြော။ ခက်တာက သူတို့ သွားဖို့ဆို အင်္ဂလန်က ဗီဇာတောင် ပေးမလား မသိ။ ပေးလို့ သွားတယ် ဆိုအုံး ဘယ်သူက ကြက်ဥပုံ ဝိုင်းရပ်ပြီး ကြိုမှာတုန်း၊ သမိုင်းဝင် မိန့်ခွန်း ပြောဖို့ နေနေသာသာ။ ဒီဟာမ တွေကလည်း နေရာမသိ၊ ခက်ပါဘိတော့။ လေလုံးမကွဲတဲ့ အင်္ဂလိပ်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်ကနေ ကနေ မိန့်ခွန်းပြောမယ် တကဲကဲ။ မနည်း ဆွဲထားရတယ်။ အရှက် ခွဲမယ့်ဟာတွေ။
ဒါမှ စဉ်းစားလို့ မပြီးသေးဘူး။ လျှပ်စစ်မီး ချက်ချင်း နေ့တိုင်း ပုံမှန်ရဖို့ ဆန္ဒပြကြသတဲ့။ ဘယ်လို လုပ်ရပါ့။ ချက်ချင်းကြီးတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးထင်တယ် ကွယ်တို့ရယ်။ ငါက လက်နှီးစုတ် လျှော်ရတဲ့ ကောင်ပါ အဲ သမ္မတပါ။ ဖရောင်းတိုင်က ဘုရား မီးပူဇော်ဖို့ပဲ အသုံးဝင်တယ် ထင်ခဲ့တာ။ အခုမှ သိရတော့တယ် ၊ ဆန္ဒလည်း ပြလို့ရသတဲ့။ ကဲ ဖမ်းမလား၊ လွှတ်ထားမလား။ ခေါင်းရှုပ်တယ်။ ငါ့ သမီးဆို အခုထိ ကိုယ်ပိုင်ကား မဝယ်နိုင်သေးဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သမီးတိုင်း BMW စီးကြေးဆို အရင်ဆုံး ဆန္ဒပြ သင့်တာက ငါ့ သမီးပဲ။ "ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သမီး BMW စီး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သမီး လက်ဆပ်စ် စီး" ဆိုင်းဘုတ် ကိုင်ရင်း နဲ့ လေ။
ဟို ရခိုင် ပြည်နယ်ကလည်း ပြဿနာ အငွေ့ တထောင်းထောင်း။ လူ့ အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ ကောင်တွေကလည်း အပြစ်ပြောဖို့ ချောင်းနေတာ။ ဒီ ဟာတွေ ငါ့ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်တာ ငါ သိသပ။ နယူးယောက်က ငနဲ ဘလော့ဂ်ဂါက ငါ မဖတ်တတ်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ မိုးလား ကဲလား ရှောက် ရေးနေသတဲ့။ Who care? ပေါ့လေ။ လူမျိုးတုန်း သတ်ပွဲဆိုလား၊ ဘာဆိုလား။ Who care? အိုဗားမားလည်း ငါ့နေရာမှာဆို အသားဖြူမလာရင်သာရှိမယ်၊ ဟဲယားလုစ် တော့ဖြစ်မှာ။ Who care? အခု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘဝ ကထက် ဆံပင်ကျွတ်နှုန်း ပိုမြန်လာတယ်။
ငါကမှ တကယ့် ထိုင်ခုံပူ( Hot seat ) ပေါ် ရောက်နေတာ။ ဒီပြဿနာတွေ ရအောင် ရှင်းနိုင်ရင် ငါတောင် နိုဘယ်ဆု အိပ်မက် မက်လို့ ရသတဲ့။ အရူး ချေးပမ်း မီဒီယာ ပြောတာပါ။ အေးလေ ရရင်တော့ ယူရသေးသပ။ ရလို့ ယူလိုက်မိရရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ပို့ လိုက်မှ ဒုက္ခ။ နိုဘယ်ဆု နဲ့ ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ချို့ နဲ့ကလည်း တစောင်းစေးနဲ့ မျက်ချေး။ ဟို ပါလီမန် အမတ် ပြန်မရောက်သေးဘူး။
နယူယောက်က ဖူလာ ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း ဘယ်ကရတဲ့ အင်ဖိုတွေလည်း မသိဘူး၊ ငါ့ အကြောင်းကို ရေးထားလိုက်တာ ခရေစေ့ တွင်းကျ၊ သူ့ သုံးသပ်ချက်တွေက ပါးသေး။ တစ်ချို့လည်းမှန်၊ တစ်ချို့လည်း ကိုးယို့ ကားယားတွေ။ စစ်သားနဲ့ မတူတဲ့ စစ်သား တဲ့။ စစ်သား နဲ့ မတူလို့ ပရော်ဖက်ဆာနဲ့ တူနေရမှာလား။ မပြတ်သား၊ စည်းရုံးရေး မရှိ။ စိတ်ဓာတ်လေးကတော့ အနူတောမှာ လူချော တဲ့။ သမ္မတ အလုပ်ခိုင်း မလို့ အဘ က လက်သပ်မွေးခဲ့ တာမို့ ဆန္ဒမပါဘဲ သမ္မတ ဖြစ်လာရသူ တဲ့။ လူနောက် ဖူလာ။ အင်း ဒါနဲ့ ဟို ပါလီမန် အမတ် ပြန်မရောက်သေးဘူး။
လူတွေကလည်း ဆန္ဒပြလုိ့ ရပြီလည်း ပြောလိုက်ရော ပြလိုက်ကြတဲ့ ဆန္ဒ၊ နေရာတိုင်းမှာ။ ဆန္ဒပြလုိ့ ဖမ်းတော့ မဖမ်ဘူး၊ အခွန်တော့ ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ ဥပဒေ ထုတ်ရင် ကောင်းမယ်။ အိန္ဒိယ လိုဖြစ်မှာ စိုးရတယ်။ အိန္ဒိယ မှာ ဆန္ဒပြ မခံရတာဆိုလို့ လမ်းပေါ်က နွားတွေပဲ ကျန်တော့တယ်။ နွားကို ဆန္ဒပြတဲ့သူ ဆန္ဒအပြခံရတဲ့ နိုင်ငံပေပဲ။
ဟို အကောင် လာဘ်စားတဲ့ ကိစ္စက အရေးထဲ မီဒီယာပေါ် ရောက်လာပြန်ရော။ တော်တော် ညံ့တဲ့ကောင်။ အင်းလေ တစ်ခါ မဟုတ်တော့လည်း... ။ လူတွေကလည်း လူတွေပဲ။ လာဘ်စားတာများ သတင်းလုပ်လို့။ လာဘ်မစားလို့ ဒီကောင်တွေလစာနဲ့ ဘယ်ကလာ စင်ကာပူ မှာ ဘန်ဂလို ဝယ်နိုင်မှာ တုန်း။ ဟို ပါလီမန် အမတ် ပြန်မရောက်သေးဘူး။
ပါလီမန် အမတ်က ကမ္ဘာမှာကျ သမ္မတ ထက်ကြီးနေတယ်။ ဒါပေမယ့် နေပြည်တော်မှာတော့ ငါ ဘုရင်ပါ။ သွားချင်တဲ့ ခရီးတစ်ချို့ ရှိခဲ့ပေမယ့် သူက အရင်ထွက်သွားတော့ ငါမသွားလိုက်ရပြန်ဘူး။ သူ နဲ့အတူ ကမ္ဘာ့အပြင် ထွက်ဖို့ကလည်း တကယ့်ကို ချဲလင့်ဂ်ျ။ ဒါနဲ့ နိုင်ငံ ပေါက်စက ထုတ်တဲ့ သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့ အာဘော်ကတော့ မဆိုးလှဘူး။၂၆ ရက်နေ့ ထုတ် မှတ်တယ်။ ဘာတဲ့ ပါလီမန် အမတ် ဟာ "prisoner of conscience" ထက် "flexibility of politician" ဖြစ်သင့်တယ် တဲ့။ သူနဲ့ ငါ အတူတကွ လက်တွဲ မှ အဆင်ပြေနိုင်မတဲ့။ ဒီကောင် မဆိုဘူး။
အနောက်က သူ့ အသံကို ပို နားစိုက်ပေမယ့် အရှေ့ကတော့ ငါပြောတာကို စောင့်နေကြတာပါ။ လောရှည် ဂိုချောက်ထောင် နဲ့ အဖွဲ့ ပါလီမန် အမတ် မရှိခင် ငါ့ လာတွေတာသာ ကြည့်။ ဒါနဲ့ အဲဒီ ပါလီမန် အမတ် ပြန်မရောက်သေးဘူး။
ဟိုကောင်တွေရဲ့မြှောက်ထိုး ပင့်ကော်က ရှိသေး။ မြန်မာ ရဲ့ ဂေါ်ဘာချော့ တဲ့။ ငါမှာဖြင့် ဂေါ်ဘာ ကို ချော့ဖို့ နေနေ သာသာ နလဗိန်တုံး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ချော့ နေရတုန်း။ တော်တော် လက်ပေါက် ကပ် တဲ့ ကောင်တွေ။ ငါလို နယူးယောက်လောက် တော့ ရောက်ဖူးမှ သူတို့ မျက်စိပွင့်မှာ။ အင်းလေ စိတ်ကောင်းလေး မွေးပြီး တတ်နိုင်သလောက် လုပ်တာပ။ ငါကမှ အဘ အဆက်ဆက် သုံးလာတဲ့ သမိုင်းအ်ိမ်သာခွက် ဆေးရတဲ့ ကောင်။
ဒါနဲ့ သန်းထွဋ် ဆိုတဲကောင် ပါလီမန် အမတ်ရဲ့ သတင်း သတင်းစာမှာ မဖော်ပြတဲ့ အကြောင်း ပြောသွားတာ မဆိုးဘူး။ လွှတ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုရင် သတင်းစာထဲ ထည့်ပေးမှာပါ တဲ့။ အဓိပ္ပါယ် မရှိပေမယ့် နားထောင်လို့တော့ ဖြစ်သေးသပ။ ဒါပေမယ့် ပါလီမန် အမတ်ကလည်း မမှုပါဘူး။ မြန်မာ့ သတင်းဆို စ်ိတ်မဝင်စားတဲ့ နိုင်ငံ ပေါက်စက တောင် သူ့ အကြောင်း မြန်မာ့အကြောင်း တွေ ဖော်ပြနေလိုက်တာ နေ့တိုင်း လိုလိုပဲ။ ဒါနဲ့ အဲဒီ ပါလီမန် အမတ် ပြန်မရောက်သေးဘူး။
ဘာသာရေးဝတ်ရုံများနှင့် (၂၁) ရာစု ဖက်ရှင်လောက
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/25/2012 - 1 comment
ဘုရားရှင်သည် ဒီဇိုင်နာဖြစ်သည်ဟု ရေးပြီးသည်မှ မကြာမီ အခြားသော ဘာသာရေးဝတ်စုံများလည်း ၂၁ - ရာစု ဖက်ရှင်၏ အသုံးအဆောင်ဖြစ်သည်ကို ထပ်တွေ့ရပြန်သည်။ ဘုရားရှင်ကတော့ ဒီဇိုင်နာဖြစ်ရုံသာမကတော့ဘဲ တစ်ခါတစ်ခါ ဘုရားဆင်းတုတော်များကိုယ်တိုင်ပင် ဖက်ရှင်ထဲ ရောက်နေသည်ကို ဝမ်းနည်းစွာ တွေ့မြင်ရသည်။ ငယ်စဉ်ဘဝက ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကား ကြည့်ဖူးသည်။ (အမှတ်မမှားလျှင် ဂျိန်း(စ်)ဘွန်းကားဟု ထင်သည်။) ဘုရားဆင်တုတော်ကို ဟော်တယ်၏ Decorate တစ်ခုအဖြစ် ဆက်တင်လုပ် ရိုက်တာကို ကြည့်လိုက်ရဖူးသည်။ ဘုရားဆင်းတုတော်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆင်းတုများနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည်။
ဤရုပ်ရှင်ကားများက ကမ္ဘာကျော်၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာများကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာများပီပီ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး ပြောမနေကြဘဲ ကြိတ်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြရသည်သာ များလေသည်။ အာဖဂန်နစ်စတန်မှာ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသော ဘုရားဆင်းတုတော်နှင့် နှိုင်းစာလျှင်တော့ ဘုရားဆင်းတုကို ရုပ်ရှင်ထဲ ထည့်ရိုက်တာကမှ တော်သေးသည်ဟု ယူဆရန်တော့ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပြန်သည်။
ယနေ့ ဖက်ရှင်လောကက ခရစ်ယန်ဝတ်စုံကိုလည်း အလွတ်မပေးကြတော့။
The Escape Chapel Party က ခရစ်ယန်သီလရှင်၏ ဝတ်စုံတစ်ပိုင်းကိုယူကာ မော်ဒယ်မိန်းကလေးကိုယ်ပေါ် ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်သည်။ ရိုမန်ကက်သိုလစ် ခရစ်ယန်တွေက ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြရ၏။ ရဲကိုပင် အကြောင်းကြားထားသည်ဟု ဆိုသည်။ တစ်ပိုင်းကြောင် သီလရှင် ဒင်းနားတက်နေဟန်ပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
ထိုကိစ္စမှ ပြော၍ မဆုံးခင် ပန်းအလှဆင်သူများ အဖွဲ့ချုပ်က (Floral Designers Society Singapore) တာအိုဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး၏ ဝတ်ရုံတော်ကို အလှပြမယ် ကိုယ်ပေါ် တင်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ ဝတ်ရုံအပြင် ပန်းမျိုးစုံတို့ဖြင့်လည်း အလှဆင်ထားသည်။ ပို၍ ဂယက်ရိုက်စေသည်က ထိုဝတ်ရုံသည် သာမန်ဝတ်ရုံ မဟုတ်၊ အရေးကြီးသော အခမ်းအနားများ ရှိမှသာ ဝတ်ဆင်ရသော ဝတ်ရုံဟု တာအိုဘာသာဝင်တို့က ဆိုကြလေ၏။
ဘာသာရေးဝတ်ရုံကို ဝတ်ဆင်ထားသော်လည်း သူမက အလှပြမယ် ဖြစ်နေသဖြင့် ရင်ညွှန့်အထက်ပိုင်းကို လုံလုံခြုံခြုံ ဖုံးဖိ၍ မထား၊ ထို့ကြောင့် တာအိုဘာသာအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌက ထိုကိစ္စကို တော်တော် မကြေမနပ် ဖြစ်နေသည်။ သူတို့ကလည်း ရဲကို အကြောင်းကြားထားသည်ဟု ဆိုကြသည်။
ထိုကိစ္စမျိုး ကြုံတွေ့လာပါက အခြားသော ဘာသာဝင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့လောက် သွေးမအေးကြ၊ ချက်ချင်း တုန့်ပြန်ကြ၏။ အလွန်အမင်း မဟုတ်လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ရှိတတ်ကြသည်။ ကောင်းသလား၊ မကောင်းဘူးလားဟု ပြောရန် အလွန်ခက်သော ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဘုရားရှင်ကလည်း ငါ့ကိုလည်းကောင်း၊ ငါ့ဒေသနာကိုလည်းကောင်း၊ သံဃာကိုလည်းကောင်း စွပ်စွဲပုတ်ခတ်လာသော် အလွန်အမင်း ၀မ်းနည်းနေရန်မလိုဟု လမ်းညွှန်တော်မူခဲ့၏။
ဤကျောင်း၌ပင် ဓမ္မာရုံထဲရှိသော ဗုဒ္ဓဝင်ဆေးပန်းချီများ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ လူ သိပ်မသိလိုက်။ ချက်ခ်ျကျောင်း၏ အုတ်နံရံ၌ Grow! (သို့မဟုတ်) Growl ဟု ဖတ်၍ရသော စာတမ်းတစ်ခု လက်ဆော့သူက ဆေးဖြင့် ပက်ဖြန်းထားခဲ့သည်။ ရုပ်ပုံများ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသော (ပို၍ ကြီးကျယ်သော) ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းက သိုသိုသိပ်သိပ် ကိစ္စအေးလိုက်သော်လည်း စာတမ်းရေးထိုးခြင်းခံရသော ချက်ခ်ျကျောင်းကိစ္စကတော့ သတင်းစာအဆင့်အထိ ရောက်ရှိခဲ့လေသည်။
ဤသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ကောင်းကွက်လား၊ အားနည်းချက်လား၊ ပြောရန် အလွန်ခက်ခဲလှသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ၊ စိတ်တော့ အေးချမ်းပါ၏၊ ထူထူပူပူ မရှိကြ။
သူများနှင့်မဆိုင်၊ ကိုယ်နှင့်သာဆိုင်သော ကိစ္စတစ်ခု ရှိသည်။
အခြားအခြားသော ဘာသာများက ယင်းတို့၏ ဘာသာရေးဝတ်ရုံကို အလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်။ ထိုဝတ်ရုံများဖြင့် မသင့်မတင့်သော နေရာများသို့ မသွားရန်၊ မရောက်ရန် အထူးဆင်ခြင်ကြသည်။ ဘာသာရေးဝတ်စုံသည် မဖြစ်မနေ ကိစ္စမှလွှဲ၍ ဘာသာရေးအသိုင်းအဝန်း၌သာ ရှိနေသင့်သည်ဟု ယူဆကြသည်။
ဤကိစ္စ၌လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာက သွေးအေးသည်။
ဘုရားရှင်၏ ဝိနည်းတော်၌ပင် သင်္ကန်း (ဝတ်ရုံ) ကို သာမန်ဝတ်ရုံ၊ အခမ်းအနားရှိမှ ဝတ်ရမည့် ဝတ်ရုံဟူ၍ ခွဲခြားတော် မမူခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် သင်္ကန်းက သင်္ကန်းသာဖြစ်၍ စပယ်ရှယ်သော၊ မရှယ်သော ဝတ်ရုံဟု မရှိတော့ပေ။
ထို့ကြောင့် ဖြစ်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ စင်္ကာပူရောက်ခိုက် ဘာသာရေး အခမ်းအနားများလည်း ဤသင်္ကန်း၊ ဆင်တိုဆာ အလည်သွားလည်း ဤသင်္ကန်း၊ ကုလားဈေးသွားလည်း ဤသင်္ကန်း၊ မြန်မာဈေးသွားလည်း ဤသင်္ကန်း ဖြစ်နေရသည်။ ဝိနည်းတော်နှင့် ညီညွှတ်ပါ၏။ စင်္ကာပူ၌ သီတင်းသုံးကြသော သံဃာအများစုကတော့ ကိစ္စမရှိဘဲ အပြင်သိပ်မထွက်ကြ။ ခဏတာမျှ ကြွလာသော သံဃာများအတွက်ကား ဤသို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ရောက်ဖူးအောင် ကြွကြရပေလိမ့်မည်။ (ဟု ထင်သည်။)
ဘာသာရေးဝတ်စုံ (သင်္ကန်း) လူကြားထဲ ရောက်ရေး၊ မရောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာက အမြင်တစ်မျိုး ရှိနေတာလည်း တွေ့ရသည်။ ရဟန်းသံဃာများ ပေါများသော၊ သင်္ကန်းရောင် လွှမ်းသော မြို့ရွာကိုသာ သာသနာထွန်းကားသည်ဟု ယုံကြည်ကြပြန်သည်။
ရဟန်းသည် ကျောင်းတွင်း၌သာ နေရမည်ဆိုသော အချက်က ဝိနည်းတော်နှင့် ညီသော်လည်း ရဟန်းသံဃာရှားသော ဒေသတို့၌ ရောက်ရှိနေကြသော ဒကာ၊ ဒကာမများကမူ ရဟန်းသံဃာကို ဘယ်နေရာမှာပင် ဖူးတွေ့ရတွေ့ရ ဝမ်းသာကြရသည်ဟု ကြားရဖူးပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြား၌ဆိုလျှင် ဤကိစ္စက စဉ်းစားစရာ ရှိနေပြန်သည်။
သာသနာဝင်သမိုင်းများကို ကြည့်ရာ၌လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်သော အသုံးအဆောင်၊ အဆောက်အဦး စသည်တစ်ခုခု ရှိနေလျှင်ပင် သာသနာရောက်သည်ဟု ယူဆကြပြန်သည်။
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေသနာတော်များဆီ သွားကြည့်ပြန်တော့လည်း “စရထ ဘိက္ခဝေ စာရိကံ” ဟူသော စကားတော်ကို တွေ့ရသည်။ ခရီးသွားလာရန်၊ ဗဟုသုတရှာမှီးရန် ဝါသနာပါသော ရဟန်းတော်များ အကြိုက်တွေ့သော ဒေသနာဖြစ်သည်။ (ရဟန်းတို့ … သတ္တဝါတို့ အကျိုးစီးပွားအလို့ငှါ ခရီးထွက်ကြ - ဟူလို။)
သို့သော် စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် ကြည့်ကြသော ပညာရှင်ရဟန်းတော်များကမူ (အနောက်တိုင်းသား ရဟန်းတော်များသည်။ သူတို့ ချည်းကပ်ပုံက ပို၍ လူ့ခေတ်မီသည်။) ရဟန်းတော်များ သိပ်မများခင်ကသာ ဘုရားရှင်က “စရထ ဘိက္ခဝေ စာရိကံ” ဟု မိန့်သည်။ တစ်ခါသာ မိန့်သည်။ ရဟန်းတော်များ များပြားလာသောအခါ ဤစကားမျိုး မမိန့်တော့၊ မိန့်စရာလည်း မလိုအပ်တော့။ ထို့အပြင် ဝါတွင်း ခရီးမထွက်ကြရန်ပင် ထပ်မံ ပညတ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆကြပြန်သည်။
ထို့ကြောင့် ရဟန်းတော်များ မြို့ထဲရွာထဲ ရောက်သင့်၊ မရောက်သင့်ကပင် သုံးသပ်ရန် အများကြီး ရှိပြန်သည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ဝတ်ရုံကို ကိုယ်လေးစားနေလျှင် ပြီးပြီဟုသာ မှတ်ရပေတော့မည်။
၂၁ - ရာစုရဟန်းဟု မိမိတို့က ဆိုရန်ရှိ၏။
သို့သော်၊ မီဒီယာကလည်း ၂၁ - ရာစုမီဒီယာပင်တည်း။
အိုလံပစ် နဲ့ အိုဗားမား
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ, ဘာသာပြန် - on 6/24/2012 - No comments
တရုတ်တွေ အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာ ရွှေတံဆိပ်တွေ အများကြီးရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ သိချင်လုိ့ အိုဗားမား က တရုတ်ပြည်ကို လေ့လာရေး သွားလုပ်တယ်။ တရုတ်အားကစား နည်းပြက အရှေ့ ဒဿနိက နဲ့ အညီ လေ့ကျင့်ပေးထား လို့ - လို့ ဖြေတယ်။ ဒါကို အိုဗားမား က သဘောမပေါက်ဘူး။
ဒါနဲ့ လာ၊ လက်တွေ့ပြမယ် ဆိုပြီး လမ်းလျှောက်ရင်း ထွက်လာကြတဲ့အခါ လမ်းမှာ ဘတ်စကက်ဘော အားကစားသမား Yao Ming နဲ့ တွေ့တယ်။ နည်းပြက အရှေ့ ဒဿနိက ပြမယ် ဆိုပြီး Yao Ming ကို ပဟေဠိ တစ်ခု မေးတယ်။
"လူတစ်ယောက်က မင်း နဲ့ ညီ အစ်ကို မတော်ဘူး၊
ဒါပေမယ့် မင်း အဖေရဲ့ သားအရင်းတော့ ဖြစ်တယ် ဆိုရင် အဲဒါ ဘယ်သူလဲ"
Yao Ming က ခဏလေး စဉ်းစားပြီး
"ဒါဆို ကျနော် ပေါ့ဗျ " လို့ဖြေလိုက်တယ်။
အိုဗားမား က အရှေ့ဒဿန ကို မှတ်ယူပြီး အမေရိက ကို ပြန်သွားတယ်။
အမေရိက ကို ရောက်တော့ ဘောလုံးသမား ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်း ကို အဲဒီ ပဟေဠိ ကို ပြန်မေးတယ်။
"ဒေးဗစ်၊ လူတစ်ယောက်က မင်း နဲ့ ညီ အစ်ကို မတော်ဘူး၊
ဒါပေမယ့် မင်း အဖေရဲ့ သားအရင်းတော့ ဖြစ်တယ် ဆိုရင် အဲဒါ ဘယ်သူလဲ "
"Wat? Dunno" တဲ့။
ဒါနဲ့ ဘက်ခမ်းက အာရှအနွယ်ဖွား ဂေါက်သမား တိုက်ဂါးဝုဒ် ကို အဲဒီ ပဟေဠိ ရဲ့ အဖြေကို သွားမေးတယ်။
"တိုက်ဂါး၊ လူတစ်ယောက်က မင်း နဲ့ ညီ အစ်ကို မတော်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် မင်း အဖေရဲ့ သားအရင်းတော့ ဖြစ်တယ် ဆိုရင် အဲဒါ ဘယ်သူလဲ"
တိုက်ဂါးဝုဒ် က ခဏ စဉ်းစားပြီး
"That's me." လို့ ဖြေ လိုက် ပြန်တယ်။
အဖြေရ သွားတဲ့ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း ဟာ အိုဗားမား ဆီ ပြန်သွားပြီး သူ အဖြေရလာတဲ့ အကြောင်း သွားပြောတယ်။
ဒါနဲ့ အိုဗားမား က ဒါဆို ဘယ်သူလဲ လုိ့ မေးတော့ ဘက်ခမ်း က
"တိုက်ဂါး ဝုဒ် " တဲ့။
" အရူး၊ ဘယ်ကလာ တိုက်ဂါးဝုဒ် ရမှာတုန်း၊ အဲဒါ Yao Ming" တဲ့။ အိုဗားမား က။
☻ နောက် တောက်တောက် သေခြင်းတရား အကြောင်း ☻
in ပြုံးစိစိ, လှည့်ကြည့်မိတဲ့ ထောင့်ချိုးများ, ခေတ်သစ်ပုံပြင် - on 6/23/2012 - No comments
ပထမဆုံး နောက်လိုက်တာက ဟဲမင်ဝေး ပါ -
"မာ့ခ်တွိန်းကို အကြောင်း သုံးချက်ကြောင့်သူ့ကိုသိပ်ကြိုက်ပါတယ်။
၁) သူက စာရေးကောင်းတယ်။
၂) ကျနော့်ကို ဖျော်ဖြေမှု ပေးနိုင်တယ်။
၃) နောက်ဆုံး အခု သူသေသွားပြီ၊မရှိတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့် ပါ" တဲ့။
၂။ ဒုတိယ လူနောက်က ဘော်လ်တိုင်းယား -
"သူဟာ တကယ့်မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ လူသားချင်း စာနာတတ်သူ၊ မိတ်ဆွေစစ် မိတ်ဆွေမှန်။
အဲ....ဒါနဲ့..သူ တကယ်သေပြီဆိုတာ မှန်ရင် ပေါ့ဗျာ" တဲ့။
၃။ အမေရိကန် သုဘရာဇာလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ -
သူတို့ ဘယ်လောက်ပဲ နောက်နောက် ဒီ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ ကြော်ငြာက အနောက်ဆုံး။
"သေသာ သေပေးပါ၊ ကျန်တာတွေ ကျနော်တို့ တာဝန်ထားလိုက်ပါ" တဲ့။
in Politics, ဇင်ဝေသော်, ဘာသာပြန် - on 6/22/2012 -2comments
S.T. 22, June, 2012.
အခု နှစ်ရက်အတွင်းမှာ ကျနော်ရဲ့ နေအိမ်၊ အလုပ်လည်းလုပ်ရာ အောက်စဖို့ ထောင့်ချိုးမှာ မှော်ဆရာရဲ့ ဆေးကြိမ်နဲ့ အရိုက်ခံ လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါ လေဒီ လို့ခေါ်တဲ့ ဒေါ် အာင်ဆန်းစုကြည် လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုဝက်လောက်တုန်းက သူမ ပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ St Hugh ရဲ့ လမ်းအကူးမှာ လာရောက် နေထိုင်နေခြင်းပါပဲ။ အင်္ဂါနေ့က သူမရဲ့ ၆၇ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ပါတီမှာ မိသားစုတွေ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တွေနဲ့ အတူ ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ တက္ကသိုလ်ရဲ့ နှစ်ပတ်လည် လက်တင်ဆန်ဆန် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူ ဂုဏ်ပြုပွဲ။
ဥရောပ ငါးနိုင်ငံ ခရီးဟာ ဒေါ်စုရဲ့ တတိယနဲ့ စတုတ္ထ ကကြိုး အလှည့်အပြောင်း တစ်ခုပါ။ သူမရဲ့ ပထမ ကကြိုးက သူမရဲ့အဖေ လွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရဲ့ ရင်ခွင်မှာ အစ ပျိုးခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်ချိန်မှာ သူမဟာ နှစ် နှစ်အရွယ် ခေါင်းဆံစလယ်မှာ "ပန်းတွေနဲ့ဝေ" ကလေးငယ်မလေး။ အဲဒီနောက် ချစ်သလောက် အလိုတော့ မလိုက် တတ်တဲ့ မိခင်ရဲ့ ရင်ခွင်အောက်မှာ။ ဒီနောက် အိန္ဒိယ၊ အရှေ့ရဲ့ အမြုတေ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အနောက်ရဲ့ ခွန်အား အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကား။ ဒီနှစ်ခုကို မွေးမြူ ပြုစုခဲ့တယ်။
သူမရဲ့ ဒုတိယ ကကြိုးကတော့ 1964 မှာ စတင်ခဲ့တယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ၊ ကလေး မိခင်၊ အိမ်ရှင်မ၊ တိဗက် နဲ့ ဟိမဝန္တာရပ်ဝန်းယဉ်ကျေးမှု ကို အထူးပြု လေ့လာသူ Antony's Collage က ကျနော့် မိတ်ဆွေ Michael Aris ရဲ့ချစ်လှစွာသော ဇနီး။ ဒီ ခရီးက ၂၄ နှစ်ကြာတယ်။ အဲဒီ မှာ ဘဝရဲ့ ကျေနပ်စရာ၊ မကျေနပ်စရာတွေနဲ့ အတူ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်တဲ့ လမ်းပေါ်မှာ တစ်ခါတစ်ခါ လမ်းလျှောက်၊ တစ်ခါတစ်ခါ စက်ဘီး စီး၊ မီခိုးပြာရောင် ကောင်းကင်ရဲ့ အောက်မှာ။ ၁၉ ရာစု ဟန် နဲ့ ခြေတံ ရှည် အိမ်လေးပေါ်မှာ။ ဒီ ခရီးက ၂၄ နှစ်ကြာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် အထိ ဆိုပါတော့။
သူမရဲ့ တတိယ ကကြိုးက 1988 ဆောင်းဦးပေါက် အောက်စဖို့က အိမ်ဆီ ရောက်လာတဲ့ ဖုန်းခေါ်သံ တစ်ခုက ခြေလှမ်းစတယ်။ သူမ အမေ နေမကောင်း လို့ တဲ့။ အဲဒီကနေ ၈၈ မျိုးဆက် ရဲ့ အော်ခေါ်သံတွေကို ပြန်လည် ထူးမိရင်း အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကပြလိုက်ရတော့တယ်။ ဒီဘဝမှာ ဒဏ်ရာများစွာကို ယူရင်း ကုစားရင်း ပါဝါ ၅၄ ၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းက တိတ်ဆိတ်၊ အထီကျန်၊ မိခင်ရဲ့ အမွေ အိမ်ထဲမှာ အိမ် အကျဉ်းစံ၊ အိမ် အကျဉ်းခံ ဘဝ။ BBC ရဲ့ အသံနဲ့ ခန္ဓာ လန်းဖို့ စိတ် ကျန်းဖို့ ကြိုးစားရင်း ကျားကန် ထားခဲ့ရသတဲ့။
သူမရဲ့ စတုတ္ထ ကကြိုးကိုတော့ အိမ် အကျဉ်းစံ၊ အိမ် အကျဉ်းခံ ဘဝက လွတ်ချိန် ၂၀၁၀ ခု နိုဝင်ဘာ နဲ့ နှလုံးသားအောင်ပန်း ထိုး ရိုက် စိုက် လိုက်နိုင်တဲ့ ဒီနေ့ ကြားထဲမှာ လို့ ဆိုရလိမ့်မယ်။ သမ္မတ အသစ်စက်စက် ဦးသိန်းစိန်က ဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်သင့်သလို ဖြစ်စေဖို့ နိုင်ငံရေးတံခါးကို အားနဲ့ ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။ အဲဒါ သူမ ပန်လိုတဲ့ ပန်းအစစ်။ အစိမ်းရောင်တွေ လွှမ်းနေဆဲ ပါလီမန် စားပွဲထဲကို သူမ အရဲစွန့်ပြီး ရောထိုင် ချလိုက်တယ်။
ဒီနေ့က စလို့ လာမဲ့ ၂၀၁၅ ရွေး ကောက်ပွဲ ကာလဟာ အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ အူလည်နေလိမ့်မယ်။ ရာစုဝက် ကျော်ကျော် စစ်တပ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အမှား အယွင်း၊ ရိရွဲနေတဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ယူဂိုစလပ် လက်ဖျားခါလောက်တဲ့ တိုင်းရင်းသားရေး ပြဿနာ၊ အရေးပါတဲ့ နေရာတိုင်း စစ်တပ်က ဖင်ခု ထိုင်ဆဲ၊ ရခိုင် ပြည်နယ်ထဲက ဘာသာရေး ကတောက် ကဆ။ တောထနေတဲ့ ပြဿနာ ပေါင်း သောင်း ခြောက်ထောင်။ ခပ် နဲ့နဲ့ NLD ဟာ အမြန်ဆုံး တည်ဆောက် ယူရမယ်။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေထဲက ဂဏာမငြိမ်(nervous) ဗိုလ်ကျချင်တဲ့ (authoritarian) အင်အားကြီး တရုတ်ကိုလည်း မေ့ထားလို့မရဘူး။
အလျှော့ အတင်း လုပ်စရာတွေ၊ စိတ်ပျက်စရာတွေ ဟာ မလွဲမသွေ ပါပဲ။ သမိုင်း ပညာရှင် Max Weber ရဲ့ ကြော်ကြားတဲ့ အဆို အမိန့် လို ပညာရှင်ရဲ့ အက်သစ် သဘောတရားဟာ အနည်းဆုံး နိုင်ငံရေးသမား ရဲ့ တာဝန်ကျေမှု သဘောတရား တော့ စွက်ထားမှ ရလိမ့်မယ်။ ထောင်တဲက ထွက်လာတဲ့ တောင် အာဖရိက ရဲ့ နယ်လ်ဆင် မင်ဒဲလား လို၊ ပါရာဂွေး ရဲတိုက်ကို မောင်းထုတ်တာ ခံရတဲ့ ချက် ပြည်ပြေး Vaclav Havel လို အတိုက် အခံ ခေါင်းဆောင်ပဲ ဆိုဆို၊ သမ္မတ လုိ့ ပြောပြော၊ နိုင်ငံ့ အမကြီး လို့ တွင်တွင် ၆၇ နှစ် သမီး ဒေါ်စုဟာ အခု နိုင်ငံတော်ရဲ့ တစ်သက်တာ အကျဉ်းသားဖြစ်နေပါပြီ။ အကျဉ်းကျစဉ် လိုသလောက် ရနေတဲ့ အချိန် ဟာ အခု အရှားပါးဆုံး ရတနာ တစ်ခု ဖြစ်နေပြီ။ မိနစ် ၃၀ စည်းဝေး၊ စက္ကန့် ၃၀ အနားပေး။ သမိုင်းက ပေးတဲ့ ဆုလဒ်၊ ရှေ့ ဆက်ရမယ့် ခရီး၊ အသုံးသပ်ခံရတော့မယ့် စတုတ္ထ ကကြိုးကို သူမ အခုမှ ခရီး စ ခဲ့ရပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် နေသာတဲ့ အခိုက် သူမရဲ့ ၂၄ နှစ်ကြာ ကကြိုးအတွက် ဂုဏ်ပြုဖုိ့ ခဏ အချိန်ယူ လိုက်ကြရအောင်။ သူမကို ဂုဏ်ပြုဖို့ ဖျက်မရနိုင်တော့တဲ့ သမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာ သူမ ဘယ်လို ရေးထိုးသွားခဲ့ သလဲ ဆိုတာတော့ သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော် လက်တို့ပြခဲ့ပါရစေ။
တစ် - အကျဉ်းစံ အကျဉ်းခံ ဘဝက သူမ ရေးထားခဲ့ပြီး (ဒီ အက်ဆေးကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီး ရဲ့ ထမီ ထဲမှာ ဝှက်ပြီး ထုတ်ယူ ခဲ့ရတယ်။) အခု ပြန်ပြောပြတဲ့ အက်ဆေးတွေ နဲ့တင် ကျနော်တို့ နက်နက် နဲနဲ ခံစား ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ အဲဒီ အထဲက အပြောင်မြောက်ဆုံး Freedom From Fear ကို BBC Reith လက်ချာခန်းမှာ ဗွီဒီယို ကလစ် မနှစ်က ပြသခဲ့ပါတယ်။ အီဒီ အက်ဆေး ဟာ မစ္စတာ Havel ရဲ့ အကောင်းဆုံး လက်ရာတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး ရင်ဘောင် တန်းပါတယ်။ ဒီ အထဲမှာ စိတ်ဓာတ်ရေး၊ စာပေရေး၊ နိုင်ငံရေး သဘောတရားတွေ မနည်း မနော စီးမျော နေတယ်။ Reith လက်ချာမှာ နိုင်ငံရေး ဖရီးဒမ်းဟာ အဇ္ဈတ္တငြိမ်းချမ်းမှု အပေါ်မှာ တည်ဆောက်ယူသွားနိုင်တယ် လို့ ဆိုခဲ့ပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ရေး၊ စာပေရေး၊ နိုင်ငံရေး ကြားက ဟန်ချက်ကို ညီအောင် ထိန်းရာမှာ တစ်ခုခုတော့ အနည်းငယ် ရွေ့လျားမယ့် သဘော ရှိနေပါတယ်။ Havel တုန်းကလည်း ဒီလိုပါဘဲ။
နှစ် - သူမရဲ့ ရဲဝံ့မှု၊ ရိုးသားမှု၊ သန့်ရှင်းမှု။ လွတ်လပ်မှု လုံးဝ မရှိတဲ့ အရပ်မှာ ရဲဝံ့ခြင်းဟာ ရှားပါး ရတနာပါ။ အထူးသဖြင့် သူမရဲ့အကျဉ်းစံ ပထမနှစ် မှာပေါ့။ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ သားတွေနဲ့ ဝေးကွာ၊ တစ်ကိုယ်ထဲ အထီးကျန်စွာ၊ အပြည့်အဝ မရသေးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားအရိပ် အောက်မှာ၊ အခက်ခဲ ကာလပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူမသုံးတဲ့ ဝိတိုရိယ အင်္ဂလိပ် ဟန်နဲ့ "ကျမမှာ ခေါင်းမာတတ်တဲ့ အကျင့် ရှိတယ်" လို့ ဆိုရမှာပါ။
သုံး - ဒါက လူတွေ သိပ် အမှတ်မထားမိတဲ့ သူမရဲ့ အလုပ် နဲ့ ဘဝ ကို ကျနော့်ကို လက်တို့ ပြလိုက်သလိုပါ။ အဲဒါ အရှေ့ အနောက် ပေါင်းစပ်ထားမှု။ ဥပမာ နိုဘယ်လ်ဆု ယူစဉ် မိန့်ခွန်းပြောတော့ စာအုပ်ကြီးတွေထဲက အင်္ဂလိပ် စကားလုံး အဟောင်းတွေ၊ အင်္ဂလိကန် ဝေါဟာရ လို့ဆိုရမလောက် သုံးပြသွားတယ်။ "other reaches of the earth" "some of our warriors fell at their post" "perfect peace is not of this earth" စတာတွေပါ။ နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာက ပြောတဲ့ ဒုက္ခ ခြောက်မျိုးကို (ဒုက္ခ ကို suffering လို့ မပြည့်မစုံ ဘာသာပြန်တယ်) သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝ နဲ့ နိုင်ငံရေး ကိစ္စတွေထဲမှာပါ လက်တွေ့သုံးသပ်ပြသွားတယ်။ ဒီ ယဉ်ကျေးမှု နှစ်ခု ကို တစ်ဖက်စီမှာ ထားတာတောင် မဟုတ်ပဲ ဟန်ချက်ညီညီ ပေါင်းစပ် ပြလိုက်တယ်။
အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ် ပတ်ဘလစ် အော်ရေတာက သူမရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာ ဘွဲ့ ချီးမြှင့်ရာမှာ အနောက်ရဲ့ သမိုင်းဝင် လက်တင်လို မိန့်ခွန်း ချွေတော့ သူမကို အရှေ့က ကြယ်တာရာ (praesento stellam orientalem) လို့ ညွှန်းဆို လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ် သူမ ဆိုသလို ဆိုရမယ် ဆိုရင် တက္ကသိုလ်တွေဟာ လူ့ယဉ်ကျေးမှု ကို အထွတ် အမြတ် လေးစားကြဖို့ သင်ကြားပေးကြတာပါ၊ ဒီ ယဉ်ကျေးမှု တွေကတော့ ကမ္ဘာ့ နေရာစုံကနေ စီးဝင်လာခဲ့တာပါ တဲ့။
ယိုယွင်းစ ပြုလာတဲ့ အနောက်ရွာဟာ တက်သစ်စ အရှေ့ဆီက သင်ယူစရာ အလှည့် အပြောင်း တစ်ခေတ် ရောက် လာနေပြီ ဆိုတာ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် သတိပေးထားခဲ့လေရဲ့။ သူမ အကြိုက်ဆုံး နာမည်ကျော် အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာ တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Rudyard Kipling က လှလှပပ သမိုင်းဝင် နေရအောင် ဒီလိုပြောခဲ့တယ် " But there is neither East nor West .....when two strong men stand face to face." တဲ့။
ဒီ.... လေဒီ နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့ စကားကိုပဲ ငှားပြီး ပြောရရင်
"And there is both East and West ,when one strong woman faces generals and the world."
(The writer isaprofessor of European studies at Oxford and senior fellow at the Hoover Institution, Stanford University.)
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/21/2012 - No comments
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြားမှာ ဓမ္မဟာ မကြာမီ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ရှိနေကြတယ်။ ဒီအယူအဆကို လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းရှိပေမယ့် ဒါဟာ ရှေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ယုံကြည်မှုတစ်မျိုးပါ။ အဲဒီတုန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာပတ်သက် ဆက်နွယ်နေတဲ့ အထောက်အကူ တွေကလည်း မလုံမလောက် ရှိနေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်လာဟန်တူပါတယ်။
ဒီယုံကြည်မှုဟာ တကယ်ရော မှန်နိုင်ပါသလား။
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့ ပထမဆုံး “ဓမ္မ” ဆိုတာ ဘာလဲ လို့ မေးကြရပါလိမ့်မယ်။
၁။ ဓမ္မဆိုတာ အစစ်အမှန် သဘာဝတရား။
၂။ ဓမ္မဆိုတာ ဘုရားရှင် ထိုးထွင်းသိတော်မူခဲ့ပြီး ဟောကြားထားတဲ့ သစ္စာတရား။
၃။ ဓမ္မဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဘုရားအဆုံးအမနဲ့ အညီ ကျင့်သံးနေထိုင်မှု လို့ သုံးမျိုး ခွဲ ကြည့်နိုင်တယ်။
ဓမ္မဆိုတာ သဘာဝတရားလို့ ဘာသာပြန်ဆိုတဲ့ ပထမ ဖွင့်ဆိုချက်အရဆိုရင် ဓမ္မဟာ ဘယ်တော့မှ မကွယ်ပျောက်နိုင်ပါဘူး။ အာကာသ (Space)၊ ဓါတ်သဘာဝ (Energy) နဲ့ အချိန် (Time) ဆိုတာတွေ ရှိနေသရွေ့ ဓမ္မလည်း တည်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယ နဲ့ တတိယ ဖွင့်ဆိုချက်တွေအရဆိုရင် ဘုရားရှင်ရဲ့ စကားတော်၊ လူသားရဲ့ နားလည်မှု နဲ့ အကျင့်စရိုက် စတာတွေအားလုံးဟာ သင်္ခါရတရားတွေချည်းမို့ပါ။ သင်္ခါရတိုင်းဟာ အနိစ္စ တွေ ချည်းပါပဲ။
ဒါတွေကွယ်ပျောက်သွားပြီဆိုရင် နောက်ပွင့်မယ့် အရိမေတ္တယျဘုရားရှင်က ဒါတွေကို ပြန်လည် သိမြင်လာပြီး ဟောပြတော်မူပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယနဲ့ တတိယ ဖွင့်ဆိုချက်အရ ဓမ္မဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားမလဲ။
ဒီမေးခွန်းကို မေးတဲ့အခါမှာ ဘုရားရှင်က “အက္ခရာတွေကို မှားမှားယွင်းယွင်း အသံထွက်မယ် ဆိုရင် ၊ အနက်အဓိပ္ပါယ်တွေလည်း မှားယွင်းကုန်မယ်။ အသံထွက်မှားယွင်းမှုကို အခြေခံပြီး အဓိပ္ပါယ် အယူအဆတွေလည်း မှားနိုင်တယ်”။ လို့ ဖြေတော်မူခဲ့တယ် (A-1, 59)
ဒီနေရာမှာ ဘုရားရှင်ဆိုလိုတာက “စကားတော်” တွေပါ။ ဒါတွေကို တပည့်သားတွေက နှုတ်တက် အာဂုံဆောင်ထာကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီစကားတော်တွေကိုပဲ အက္ခရာနဲ့ ရေးသားပြီး ပိဋကတ်သုံးပုံ ဆိုတာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီ အဆိုအရာ ဓမ္မကွယ်ပျောက်ဖို့ဆိုတာ အန္တရာယ်မကြီးလှသေးပါဘူး။ ဒီခေတ်စာအုပ်စာပေ ထုတ်ဝေသိမ်းဆည်းပုံ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း မီဒီယာတွေရဲ့ အကူအညီတွေဟာ အလွန်စိတ်ချရတယ်။ အလွယ်တကူရနိုင်သလို ပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာဖတ်ရှု လို့ ရပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းမျိုးပါပဲ။ အခြားတစ်နေရာမှာ “မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်ပြီးတဲ့နောက် သူတော်ကောင်းတရားကွယ်ပျောက်စေဖို့ အဓိက အကြောင်းတရားက ဘာပါလဲ ဘုရား” ဘုရားရှင်ကိုမေးတော့ ဘုရားရှင်က သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါး မပွားများရင် သာသနာကွယ်မယ်” လို့ ဖြေဆိုတော်မူပြန်ပါတယ်။ (S.V. 174)
ဒီနေရာမှာ ဘုရားရှင်ဆိုလိုတာက တရားရှုမှတ်ခြင်းနဲ့ လူတွေ စိတ်ဖြူစင်အောင် ၊ စိတ်ငြိမ်းချမ်းအောင်၊ ကျင့်ဆောင်နေသမျှ “ဓမ္မ” လည်း တည်နေမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
ဒီလိုပါပဲ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘုရားရှင် မိန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ “ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ၀ါယော” ဆိုတဲ့ ဓါတ်ကြီးတွေက သဒ္ဓမ္မကို မကွယ်စေနိုင်၊ အသုံးမကျတဲ့ မောဃပုရိသ တို့ကြောင့်သာ သဒ္ဓမ္မဟာ ကွယ်သွားနိုင်တယ်” တဲ့။
ဒါတွေဟာ ဓမ္မတည်ရှိနေပုံရဲ့ အဖြေတွေပါ။
ဓမ္မဟာ ဘယ်လောက်ရှည်ရမယ် ဆိုတဲ့ သက်တမ်းမရှိသလို ဘယ်အချိန်မှာ ကွယ်ပျောက်သွားမယ် ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်အချိန်လည်း မရှိပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေ ဓမ္မကို သဘောပေါက်နားလည်စွာ ကျင့်သုံးနေသရွေ့ ဓမ္မ တည်ရှိနေမှာပါ။
အသုံးမကျတဲ့ မောဃပုရိသတွေလည်း လူနည်းစု ဖြစ်နေရင်ပေါ့။
Ref.: The disappearance of the Dhamma
- A Guide to Buddhism A to Z , S. Dhammika
¸.•♥• ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ ကျနော်တို့ အမြင် •♥•.¸
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 6/20/2012 - No comments
"တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်တယ်ဆိုတာ ဘုရားစိုက်တဲ့ ပန်းကလေး ပွင့်လာတာ" လုိ့ တာရာမင်းဝေက ပြောဖူးတယ်။
၂။ Lance Morrow
"သမ္မာ ကျမ်းစာထဲမှာတော့ မစားအပ်တဲ့ အသီးကို စားမိပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်သွားကြလို့ ထာဝရ ဘုရားရှင်က ဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ အာဒမ် နဲ့ ဧဝ ကို အလုပ်လုပ် ခိုင်းတယ်။ အလုပ်ကို ဒဏ်ခတ်တဲ့ အနေနဲ့ ခိုင်းတာ၊ ဆုပေးတဲ့ အနေနဲ့ ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာဦး ကတည်းက အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ် မဆောင်ဘူး" လို့ Lance Morrow က တိုင်း မဂ္ဂဇင်း မှာ ရေးခဲ့ပြန်ရော။
ဘာပဲပြောပြော ဘုရားစိုက်တဲ့ ပန်းကလေး ပွင့် မလာခင်အလုပ်ရှိမှ ဆိုတဲ့သဘောကိုတော့ သမ္မာကျမ်းစာက ဆိုလိုချင်ဟန်တူပါတယ်။ "ဒါကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့တွေ များလာတာဟာ ချစ်ခြင်းတရားတွေ ခေါင်းပါးလာလို့" - လို့ ( ဒီ စာညွှန်းနှစ်ခုကို ကြည့်ပြီး) ကျနော် ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။
(အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အလုပ်မရှိဖြစ်နေသူတွေ သမ္မာ ကျမ်းစာထဲက အတိုင်း ချစ်သူ ရှာကြဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။)
အဲ ချစ်သူရှာတဲ့အခါ မျက်စိမှတ်ပြီးရှာရင် တွေ့ဖို့ ပိုမြန်သလို နှလုံးသားနဲ့ ပို နီးစပ်သတဲ့။ ကြားဖူးနားဝပါ။ အလုပ်ဖြစ်လို ဖြစ်ငြား ပေါ့။ သူကလည်း မျက်စိမှိတ် ရှာမယ့်သူ ဖြစ်နေရင်တော့ ကျနော့် တာဝန် မဟုတ်တော့ဘူး။
ဒေါ်စုကို အာရှအရေးလောက်နဲ့ ကန့်သတ်တာ မှားတယ်
in Politics, ဇင်ဝေသော်, ဘာသာပြန် - on 6/19/2012 - 1 comment
မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခပ်ချာချာ ဆောင်းပါး စထရိတ်တိုင်းမှာ ဖော်ပြတာ ကျနော် လက်လှမ်းမီသရွေ့ ဒီဟာက ဒုတိယ အကြိမ်ပါ။ ပထမ အကြိမ်က ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးပါ။ အဲဒီတုန်းက မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွဲပြီး ကျနော်တို့ တုန့်ပြန်ခဲ့ကြဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့် ဒီလောက်မရှိသေးပါဘူး၊ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်သူတွေကိုသာ ဆောရီးပြောပြီး သူတို့ အားနည်းချက်ကိုတော့ လူထုရှေ့ ချမပြခဲ့ကြဘူး။
ဒီတစ်ခါ ပိုလှသွားတယ်၊ မကျေနပ်လို့ တုန့်ပြန်တာက မြန်မာ မဟုတ်ဘဲ အဖြူဖြစ်နေတယ်။ ဆောရီးရုံနဲ့ မရတော့ဘူး။ ဒီကောင်က အခြား သတင်းစာကနေ ပြန်ဆော်လိုက်ရင် အခြေအနေ ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်။ ဘာပဲပြောပြော Michael J.Montesano ကို ကျေးဇူးစကား ဆိုလိုက်ပါတယ်။
Thank you Mr.Michael J Montesano for your standing point, time and efforts.
အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ရတာ ပျင်းသူတွေအတွက် ခပ်ပါးပါး ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်စု ကို အာရှအရေးလောက်နဲ့ ကန့်သတ်တာ မှားတယ်
ပါမောက္ခ Kishore Mahbubani ရဲ့ ဆောင်ပါးကိုပဲ ဖတ်မိမယ်ဆိုရင် မြန်မာ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုဟာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံကီု ရောက်ခဲ့ပြီးပြီ ဆိုတာ လုံးဝ မသိနိုင်ဘူး။ အိမ်နီးချင်း အာဆီယံ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံကို အနှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်ရောက်ပြီး World Economic Forum ကို တက်ရောက်ခဲ့တယ် ဆိုတာလည်း သူ့ ဆောင်းပါးဖတ်ရုံနဲ့ မသိနိုင်ဘူး။
သူမ တက်ရောက်လာခြင်းဟာ အာရှ စီးပွားရေး တက်လာမှုကို သက်သေထူလိုက်သလိုပါ၊ စနေနေ့က အော်စလိုမြို့မှာ နိုဘယ်လ်ဆု ယူစဉ်က ပြောခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာလည်း သူမကို အကူအညီ ပေးခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတက် ပြည်နယ်အစိုးရကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
မှန်ပါတယ်၊ အာစီယံ နိုင်ငံတွေနဲ့ အိမ်နီးချင်းအာရှ နိုင်ငံ တွေဟာ မြန်မာ့ အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်စု သူမကိုယ်သူမ ပုံသွင်းထားတာကကို သူမနိုင်ငံ အတွက်သာမက ကမ္ဘာနဲ့ဆိုင်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ဒီမိုကရေစီ တန်ဖိုးတွေ အတွက်ရောပါ။
မြန်မာတွေ အတွက် ဒီတန်ဖိုးတွေ ရရှိဖို့ တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစား ထောက်ပံ့ကြရာမှာ အာစီယံ နိုင်ငံတွေထက် ဥရောပ နိုင်ငံတွေက ပိုပြီး အသံကျယ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ လတ်တလော သမိုင်းကိုတော့ ပါမောက္ခ Kishore Mahbubani ငြင်းနိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဥရောပနဲ့ အာရှ နိုင်ငံတွေကြား မြန်မာနိုင်ငံ ဗျာများပြီး အရွေးမှားအောင် အလံရူးလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး လို့တော့ ထင်လိုက်ရပါတယ်။
နိုဘယ်လ်ဆု ယူစဉ်က ပြောခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဟန်ချက်ညီရေးသာမက ကမ္ဘာ့အတွက်ပါ ပါဝင်တယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဥရောပဘာသာ စကားတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား မှာလည်း အာရှ ဘာသာ စကားတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မြန်မာစကားထက် မညံ့အောင် ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်း ဥရောပရော အာရှဟာ သူမရဲ့ အိမ်တွေ ဆိုတာ ပြနေပါတယ်။
သူမရဲ့ ရက်ရောမှု၊ ပွင့်လင်းမှုတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူထုအတွက် ကြိုးစားရာမှာ အာရှနဲ့ ဥရောပတို့ ဆီက အကောင်းဆုံးတွေ ရအောင်ယူနိုင်လိမ့်လုိ့ ယုံကြည်ရပါတယ်။
The Lady should look to Asia not Europe By KishorexMahbubani
Wrong to restrict Suu Kyi to Asian concerns By Michael J Montesano
တော်တော် ချာ တဲ့ Dean
in Politics, ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 6/18/2012 - No comments
The Lady should look to Asia not Europe တဲ့။
ဥရောပ တစ်ခွင် ပြဲပြဲစင် နေတဲ့ ခရီးကို အာရှသား အိန္ဒိယန်း မျိုဆက်ပီပီ ကြည့်လုိ့မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျနော်ပြောနေတာ လီကွမ်းယု စကူးလ် က ဒိန်း အကြောင်းပါ။ Kishore Mahbubani တဲ့။ ဒီနေ့ စထရိတ်တိုင်းမှာ ပေါ်လာတဲ့ ဆောင်းပါး ရေးသူ။
သူပြောမသွားတဲ့ အချက်က ဂိုချောက်ထောင် တို့အုပ်စုကရော ဒေါ်စု ဥရောပ ခရီးစဉ်နဲ့ ကိုက်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ မြန်မာပြည်ကို သွားခဲ့ကြတာလဲ။ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှ လို့ လွဲသွားတာပါ လို့ ပြောမလားမသိဘူး။ ကျနော်တို့ အဲသလောက် မ အ ကြဘူး။
ကမ္ဘာ့အနောက်ခြမ်းက ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ဖို့ အဝေးကြီးက လာနေကြချိန်မှာ အာရှ (စင်ကာပူ) က ဆရာကြီးတွေကတော့ ဒေါ်စု မရှိချိန် မြန်မာပြည်ကို သွားခဲ့ကြတယ်။
ဥရောပကို ဒေါ်စု ဘာကိစ္စနဲ့ သွားရသလဲ ဆိုတာ ပညာရှိပီပီ မေ့ချင်ယောင် ဆောင်လိုက်တယ်။ နိုဘယ်လ် ဆုယူဖို့(စီးပွားရေး အမြတ်အစွန်းပဲ ကြည့်တတ်သူတွေနဲ့တော့ ဝေးတဲ့ ဆုပေါ့။) သွားတယ်။ ပြီးတော့ ဘဝတစ်ခုလုံး သေသည်အထိ အားပေးသွားတဲ့ လင်သားရဲ့ ခေါင်းချရာ၊ အသက်ရှိနေသေးတဲ့ သားနှစ်ယောက် ရှိရာ။ မောင်းထုတ်ခံရစဉ် ထမင်းကျွေး ပညာပေးခဲ့တဲ့ နေရာ။ ဘဝတစ်ခု ခဏအမောဖြေဖို့ ဒီနေရာကို မသွားရင် ဘယ်ကို သွားမှာတုန်း မစ္စတာဒိန်း ရယ်။ ချာလှချည့်။
ဒေါ်စု ထိုင်းကိုရောက်ခဲ့ပါပြီ။ မရှောင်ခဲ့ရင် စ လုံးတွေ ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့ခဲ့မှာပါ။ ဂိုချောက်ထောင်လို မလုပ်ရင်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင်ကကို သူ့ထက် သာနေတဲ့ ဒေါ်စုကို အမျိုးသမီး အချင်းချင်း သိပ်ကြည်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူမ ပြောတာတွေကြည့်ရင် မရူးတဲ့သူတိုင်း သဘောပေါက်တယ်။ ဒါက အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့ ဒေါ်စု အပေါ်ထားတဲ့ သဘောထား အကျဉ်းချုပ်ပါ။
နိုဘယ်ဆု ယူဖို့သွားတာ၊ သားတွေနဲ့ တွေ့ဖုိ့၊ သူမ ချစ်သူတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ သွားတာကို ဒီနေ့ ဥရောပ စီးပွားရေးက လေးဖက်ထောက်နေပြီ လို့ မဆိုင်တဲ့ အစ်ရှူးကို ရူးကြောင်ကြောင် မွှေထည့်သွားသေးတယ်။ ဂရိ၊ စပိန်၊ အီတလီ တွေ အကြွေးတင်တာနဲ့ နော်ဝေး၊ ဒိန်းမတ် တို့ ဆက်စပ်လို့ မရပါဘူး။ နော်ဝေးမှာ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေရှိတယ်။ သူတို့ကို သူတို့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရအောင် ကြိုးစားဖို့ နော်ဝေက ထမင်းကျွေးပညာသင် ပေးထားတာ။ ချာလှတဲ့ ပတ်ဘလစ် ပေါ်လစီ ပါမောက္ခ။
အကြောင်ဆုံးကိစ္စက ယူတူး က ဘိုနို နဲ့ အန်ပလေး ပီယာနို ဆိုခဲ့သူ ဒယ်မီယံ ရိုက်စ် တို့က မွေးနေ့ကြို ဂုဏ်ပြုမယ့်ဂီတပူဇော်ပွဲ။ ဟျူးမင်းရိုက် ခေါင်းဆောင်၊ သူထင်ရာ သူလုပ်တတ်တဲ့ ဘိုနိုလို ကောင်က ဘယ်လိုအာရှခေါင်းဆောင်ကို ယူတူး နဲ့ ဂီတပူဇော် ဖူးလုိ့တုန်း။ မစ္စတာ ဒိန်း မေ့နေတဲ့ကိစ္စက ဒ်ါစု အကျဉ်းကျနေစဉ်မှာ ဂီတ နဲ့ ကမ္ဘာ့မျက်စိတွေ ပြူးလာအောင် ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားရင်း ဆွဲဖွင့်ခဲ့တာ ဘိုနို တို့ ဒယ်မီယံ ရိုက်စ် တို့ပါ။ စီးပွားရေး တစ်ခုဘဲ သိသူကို အနုပညာအကြောင်း ပြောရတာ လက်ပေါက်တော့ များများ ကတ်တာပေါ့။
ဒေါ်စု ထောင်ကျစဉ်က အိမ်နီးချင်းကောင်း ဆိုလုိ့ အာရှက ဂျပန်ပဲ ရှိခဲ့တယ်။ ကျန်သူတွေကတော့ ၁၉၆၂ က ကျားကြီးတစ်ကောင် ထောင်ခြောက်တွေ ဖောက်ထွက်လာမှာကို စိုးတထိတ်ထိတ်ပါဘဲ။ သူ့ သယံဇာတနဲ့ သူ့ဦးနှောက်တွေ ပေါချောကောင်း မရနိုင်တော့ဘူး မဟုတ်လား။ တရားမျှတ ပါတယ်။
အမျိုးဆိုတာ မခေါ်လို့ရတယ်၊ မတော်လို့ မရဘူး ဆိုသလိုပေါ့။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒေါ်စု စိတ်ကူးပေါက်ရင် အာရှကို လာမှာပါ။ သားတွေနဲ့တွေ့ဖုိ့ သွားတဲ့ ခရီးကို ရိုဟ်ိန်ဂျာ တွေ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ပြဿနာတွေနဲ့ ရော မမွှေကြေးပေါ့။
တကယ်တော့ ဥရောပ ဆိုတာ ဒေါ်စုရဲ့ နေခဲ့ရတဲ့အိမ်ပါ၊မြန်မာနဲ့ အာရှ က ဆယ်စုနှစ် များစွာ သူမရဲ့ အကျဉ်းထောင်ပါ။ ဒါကိုတော့ ဆိုရှယ် ပတ်ဘလစ် ဆရာကြီးက မြင်အောင် မကြည့်နိုင်ခဲ့ရှာဘူး။ သူမ အိမ် ခဏပြန်ပါစေ ဗျာ။
ပါးပါး ၊ ထူထူ လှီး တတ်တဲ့ တရုတ်၊ အိနွိယ၊ စင်ကာပူ တို့နဲ့ လည်း ကင်းလို့ မရဘူး ဆိုတာလောက်တော့ ဒေါ်စု မပြောနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက်လည်း သိပါတယ်။ ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်။
လာရင်တော့ ထွက်မပြေးနဲ့ နော် မစ္စချာ ကီရှော မဘုဘာဏီ။
ရွာအနောက်ခြမ်းက အသံများ (၂)
in ဆုထားမျက်ချယ်, ဘာသာပြန် - on 6/17/2012 - No comments
ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေ့လာကြရာမှာ ဗုဒ္ဓဝင်ကစကြတာများပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဗုဒ္ဓ မပေါ်မီ ခေတ်ကို ပြန်သွားကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဒီလိုလေ့လာမှုဟာ ဗုဒ္ဓဝင်နဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကို ပိုပြီး သဘောကျ စေမယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး သမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆက်သွယ်ချက်တွေကို ပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိနားလည် လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဗုဒ္ဓပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယရဲ့ ဒဿနအမြင်နဲ့ ကိုးကွယ်မှုကို အခြေခံလိုက်နိုင်မှာပါ။
အိန္ဒိယရဲ့ ဒဿနနဲ့ ကိုးကွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးလာပုံကို ပထဝီအနေအထားပေါ် အခြေခံပြီး သုံးသပ်ကြည့် လိုပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ဂင်္ဂါနဲ့ ယမုံနာဆိုတဲ့ မြစ်ကြီးနှစ်စင်းရှိတယ်။ ဟိမဝန္တာကနေ အစချီပြီး ဒီမြစ်ကြီးနှစ်စင်းက နယ်မြေတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခွဲထားပေးခဲ့တယ်။ နောက်မှ တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီး အိန္ဒိယလွင်ပြင် အလဟာဘတ်မြို့နားကိုရောက်မှ ဒီမြစ်ကြီးနှစ်စင်း ပေါင်းဆုံသွားတယ်။
ဒီမြစ်ကြီးနှစ်စင်းဟာ အိန္ဒိယဖလော်ဆော်ဖီနဲ့ ဘာသာရေးအစပြုပုံနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပုံတွေကို ညွှန်ပြနေတယ်။ ပထဝီ အနေအထားအရ ခြားနားသလို အဲဒီမြစ်ကြီးတွေအပေါ်မှာ အမှီပြုနေထိုင်နေကြတဲ့ လူတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကလည်း မတူကွဲပြားနေကြပါတယ်။ ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေဟာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ မတူကွဲပြားရာကနေ တဖြည်းဖြည်းနီးစပ်လာခဲ့ပြီး ယနေ့ဆိုရင် ခွဲခြားလို့တောင်မရတော့အောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ မြစ်ကြီးနှစ်စင်းကွဲပြားရာကနေ နောက်ဆုံးပင်လယ်ထဲကို အတူစီးဝင်သွားသလိုမျိုးလို့ပြောရင် ရနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
အိန္ဒိယသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တော့ ဘီစီတတိယထောင်စုနှစ်တွေကတည်းကပဲ အလွန်ဖွံ့ဖြိုးနေပြီဖြစ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို တွေ့ကြရတယ်။ ဒီယဉ်ကျေးမှုဟာ လူ့ယဉ်ကျေးမှုပုခက်လို့ခေါ်ရမယ့် အီဂျစ်၊ ဘေဘီလုံတို့နဲ့ ခေတ်ပြိုင်ပါ။ ဘီစီ ၂၈၀၀ ခန့်ကနေ ၁၈၀၀ အထိ ဖွံ့ဖြိုးခဲ့တဲ့ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းယဉ်ကျေးမှုပါ။ ဟရပ္ပန်စီဗီ လိုက်ဇေးရှင်းလို့လည်း ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီယဉ်ကျေးမှုဟာ ဒီနေ့ပါကစ္စတန်အနောက်ပိုင်းကနေ ဘုံဘေအထိ ပြန့်ခဲ့ပြီး အရှေ့ဖက်ဆိုရင် ရှင်းမလကနေ ဟိမဝန္တာတောင်ခြေအထိ ပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်။
ဒီနေ့မြေပုံကိုပြန်ကြည့်ရင် အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းယဉ်ကျေးမှုရဲ့ ခမ်းနားခဲ့ပုံကိုသိနိုင်ပါတယ်။ ဒီယဉ်ကျေးမှုဟာ နှစ်ထောင်ချီပြီးတည်တံ့ခဲ့ရုံသာမက ရုပ်ပိုင်းရော၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းပါ အများကြီးတိုးတက်နေခဲ့ပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ဆည်မြောင်းများနဲ့ မြို့ပြအိမ်ရာစနစ်တွေပါ။ အဲဒီခေတ်ကလူတွေဟာ ဒီနေ့ကွန်ပျူတာမှာသုံးနေတဲ့ binary model သင်္ချာစနစ်ကို သုံးစွဲတတ်နေပြီဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေ တွေ့ရပါတယ်။
သူတို့ဟာ စာပေတတ်မြောက်ခဲ့ရုံသာမက ရေးသားမှုပင်ရှိနေခဲ့ပြီး အဲဒီအက္ခရာတွေ ကို အခုအထိ ဘာသာ မပြန်ဆိုနိုင်သေးပါဘူး။ (အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းမှတ်တမ်းကကိုပဲ ဘာသာဗေဒအရ ဖြေရှင်းလို့မရသေးတဲ့ ပဟေဠိတစ်ခုရှိနေဆဲပါ) ။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဓာတ်ရေးရာမှာလည်း အများကြီးဖွံ့ဖြိုးနေပြီဆိုတာ Mohenjo-daro နဲ့ Harappa တို့က သက်သေခံနေပါတယ်။
အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ရှေးဟောင်းလူ့ယဉ်ကျေးမှုဟာ ဘီစီ ၁၈၀၀ နဲ့ ၁၅၀၀ ကြားမှာတော့ သဘာဝ အန္တရာယ်နဲ့ နယ်ချဲ့သူအန္တရာယ်တို့ကြောင့် တော်တော်အထိနာခဲ့ရပါတော့တယ်။ နယ်ချဲ့သူတွေဟာ အာရီးယန်း တွေလို့ ဆိုစမှတ်ပြုကြပါတယ်။ သူတို့မူလနေရပ်က အရှေ့ဥရောပကဖြစ်နိုင်ပြီး ယနေ့ ပိုလန်နဲ့ ယူကရိန်း နိုင်ငံတို့လို့ဆိုရင် ရနိုင်ပါတယ်။ အရီးယန်းတွေဟာ ဒေသခံအိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းကလူတွေနဲ့ လုံးဝမတူ ခြားနားပါတယ်။ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေက စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ အခြေချနေထိုင်တတ်ပြီး အရီးယန်းတွေက လှည့်လည်ကျင်လည် ကျက်စားတတ်ကြပါတယ်။ မြို့ပြစနစ်ကို အထာမကျကြသေးပါဘူး။
အာရီးယန်းတွေရောက်လာပြီး မကြာခင်မှာပဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတွေ လွှမ်းမိုးလာခဲ့ပြီး ဒုတိယထောင်စုတစ်ဝက်လောက်လည်းရောက်ရော အိန္ဒိယပြည်ကြီးဟာ အာရီးယန်းယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ လွှမ်းခြုံ သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေနဲ့ အာရီးယန်းတွေရဲ့ ဘာသာရေးအမြင်ကို ကြည့်ကြပါဦးစို့။ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေဆီမှာ ဒီနေ့အထိ ဘာသာပြန်ဆိုလို့မရသေးတဲ့ စာပေရေးသားမှု ရှိနေခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့သိထားခဲ့တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းဟာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအထောက်အထားနှစ်ခုနဲ့ အနည်းငယ်သွေဖီနေပါတယ်။ မိုဟိန်ဂျိုဒါဇိုနဲ့ ဟရပ္ပမှာ တူးဖော်တွေ့ရှိချက်တွေအရ ဒီစာပေရေးသားမှုတွေဟာ အာရီးယန်းတွေရဲ့ အက္ခရာတွေဖြစ်ပြီး သူတို့အောင်နိုင်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ လူတွေရဲ့ ဘာသာရေး ယုံကြည်မှု တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေးသားထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။
တူးဖော်တွေ့ရှိမှုတွေအရ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေရဲ့ အရေးကြီးတဲ့သင်္ကေတ အမှတ်အသားတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သိရပြန်တယ်။ ဒါတွေက ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင်္ကေတတွေဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာက အထွက်အမြတ် ထားတဲ့ သင်္ကေတတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ဥပမာ ဗောဓိပင်၊ ဆင်၊ သမင် စတာတွေပါ။ အရေးကြီးဆုံးလို့ ဆိုရင် ရနိုင်တာက လူတစ်ယောက် တင်ပလ္လင်ခွေ၊ လက်နှစ်ဖက်ပေါင်ပေါ်တင်၊ မျက်စိကို ခပ်ရေးရေးမှိတ်ထားတဲ့ တရားထိုင်နေတဲ့ ပုံမျိုးပါပဲ။
ဒီလို တူးဖော်တွေ့ရှိမှုတွေ၊ အထောက်အထားတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေရဲ့ ယောဂနဲ့ တရားထိုင်ခြင်းတွေကို ခြေရာခံနိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အာရီးယန်းတွေရေးသားထားတဲ့ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေအကြောင်း ဖော်ပြတဲ့ ဝေဒကျမ်း တွေကို ပြန်ကြည့်ပြန်တော့ အတည်တကျမရှိ လျှောက်သွားတတ်တဲ့ ရသေ့သူတော်စင် တွေအကြောင်းလည်း တွေ့ရပြန်တယ်။ သူတို့ဟာ စိတ်ထိန်းချုပ်မှုကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ပြီး တစ်ယောက် တည်းနေ၊ အဝတ်အစားမပါ၊ (သို့) ကြီးမားတဲ့ဝတ်ရုံတွေကို ဝတ်ရုံထားတဲ့လက္ခဏာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ဟာ မွေးခြင်း၊ သေခြင်းရဲ့လွတ်မြောက်ရာတရားတွေကို လိုက်လံဟောကြားနေတတ်ကြတယ်။
အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ တူးဖော်တွေ့ရှိမှုတွေ၊ အရီးယန်းတွေ ရေးသားထားတဲ့ ကနဦးပိုင်း အထောက်အထားတွေကို ပေါင်းစပ်ကြည့်ရင် အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေရဲ့ ဘာသာရေးအယူအဆနဲ့ ကျင့်သုံးမှုတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီး မဟုတ်တန်စေ အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ အတော်အတန် ကောက်ချက်ချလို့ရပါပြီ။
သူတို့ဘာသာရေးမှာ အရေးကြီးတာတွေ အများကြီးပါ။
ပထမဆုံး တရားထိုင်ခြင်း(သို့) စိတ်ကျင့်စဉ်အကြောင်း။
ဒုတိယ - တောရိပ်မှီခိုတဲ့ အလေ့အကျင့် စတာတွေဟာ တော်တော်လေး ယေဘုယျဆန်တဲ့ ဓလေ့စရိုက်တွေပါ။
စတုတ္ထကတော့ ဒီနေ့ကမ္မလို့ပြောရမယ့် သေတဲ့နောက်ပါလာတဲ့ နာမ်သတ္တိသဘောတရားတွေပါ။
နောက်ဆုံးကတော့ သေခြင်းတရားမှ လွတ်မြောက်ရာ ဝိမုတ္တိဆိုတဲ့ အကြီးမားဆုံးပန်းတိုင်ပါပဲ။
ဒါတွေဟာ အံ့ဘနန်း အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေရဲ့ ရှေးအကျဆုံးပုံရိပ်တွေပါ။
ယခု အာရီးယန်းတွေရဲ့ ဘာသာရေးကို ကြည့်ကြပါစို့။ တော်တော်လေး ခြားနားပါတယ်။ ရှေးဦး အာရီးယန်းတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုက ရှင်းလင်းတယ်။ သူတို့မူလနေရပ်က အရှေ့ဥရောပက ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း ရှေးဟောင်း ဂရိယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ တော်တော်များများ ဆင်တူတာတွေ့ရပါတယ်။ ဂရိနတ် မော်ကွန်းတွေကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝကို ကိုယ်စားပြုတဲ့နတ်တွေ အများကြီး အာရီးယန်းတွေရဲ့ ကိုးကွယ်မှုမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ ဣန္ဒရ(မိုးနတ်) ၊ အဂ္ဂိ( မီးနတ်)၊ ဝရုဏ(ရေနတ်) စတာတွေပါ။
အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေအတွက် ရသေ့ရဟန်းဟာ ဘာသာရေး သင်္ကေတတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပေမယ့် အာရီးယန်းတွေရဲ့ တရားဟောဆရာက ဒီထက်အများကြီး ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေရဲ့ အထွက်အမြတ်ဘာသာရေးအကျင့်က ကာမဂုဏ်ကိုစွန့်ကာ တောထွက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အာရီးယန်းတွေအတွက်ကတော့ တူတူတန်တန်မိသားစုခေါင်းဆောင် ဖြစ်ဖို့ပါ။
မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေမှာ ထူးထူးခြားခြားယုံကြည်မှု မတွေ့ရပေမယ့် အာရီးယန်း တွေအတွက်ကတော့ “သား” မွေးဖွားမှုဟာ အကြီးမားဆုံးဆုလာဒ်ပါ။
အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေက တရားရှုမှတ်ခြင်းကို အလေးအနက်ထားပေမယ့် အာရီးယန်းတွေကတော့ ယဇ်ပူဇော်မှုကို အလေးထားတယ်။
အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေက ကမ္မနဲ့ သံသရာဝါဒကို ယုံကြည်ကြပေမယ့် ဒီလိုယုံကြည်မှုမျိုး အာရီးယန်း တွေဆီမှာ မတွေရပြန်ပါဘူး။
တမလွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆတွေ၊ ကံတရားတွေ အာရီးယန်းတွေဆီမှာ မတွေ့ရပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အမြင့်မြတ်ဆုံးကိုယ်ကျင့်တန်ဖိုးက အဖွဲ့အစည်းကို သစ္စာစောင့်သိဖို့၊ လူမျိုးစုကြားထဲမှာ သပ္ပါယဖြစ်ဖို့၊ လူမျိုး ကိုပြန်လည်အကျိုးပြုဖို့ စတာတွေနဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးဘဝပန်းတိုင်ဟာ လွတ်မြောက်ရေးဖြစ်ပြီး အာရီးယန်း တွေအတွက်မှာတော့ ကောင်းကင်ဘုံရောက်ရှိရေးပါ။
အားလုံးကိုပြန်ချုပ်ကြည့်ရင် အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတို့က တောထွက်ခြင်း၊ တရားအားထုတ်ခြင်း၊ သံသရာ၊ ကံ၊ ဝိမုတ္တိတို့ကို အလေးထားပြီး အာရီးယန်းတွေကတော့ ယဇ်နတ်ပူဇော်ခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝခြင်း၊ အာဏာရှိခြင်းနဲ့ ကောင်းကင်ဘုံတို့ကို အလေးထားပါတယ်။ ဒါတွေကိုကြည့်ရင် ဒီယုံကြည်မှု နှစ်ခုဟာ လုံးဝမတူကွဲပြားခဲ့ပြီး နောက်ရာစုနှစ်များစွာကြာတဲ့အခါမှာတော့ ခွဲခြားလို့မရအောင် တစ်သားတည်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ အရီးယန်းတွေဆီမှာ ဒေသခံတွေလုံးဝမကြားဖူးတဲ့ အချက်နှစ်ခုရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဇာတ်ခွဲခြားမှုနဲ့ နတ်ဒေဝတာတို့က သတင်းပေးခြင်းဆိုတာတွေပါ။
ဘီစီ ၁၅၀၀ နဲ့ ဘီစီခြောက်ရာစု (မြတ်စွာဘုရားပေါ်ထွန်းချိန်) ကြားကာလဟာ မတူကွဲပြားတဲ့ ဒီယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခု အပြန်အလှန်နှီးနှောတဲ့ကာလ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အာရီးယန်းတွေက အိန္ဒိယအရှေ့တောင်ပိုင်း ဆီကို တဖြည်းဖြည်းရွေလျားခဲ့ကြပြီး မြို့ပြအိမ်ယာတည်ထောင်မှုစနစ်တွေက တဖြည်းဖြည်း မွေးစားကျင့်သုံး လာခဲ့ကြတယ်။ ရှေးရှေးကပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ မြစ်ကြီးနှစ်စင်း ပေါင်းဆုံသွားသလို ဒီယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုလည်း ပေါင်းစပ်သွားတော့တယ်။
ဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းတဲ့ကာလလည်းရောက်ရော ဘာသာယဉ်ကျေးမှုတွေဟာ လုံးဝဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ ပါတော့ တယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်ထဲမှာကိုပဲ ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေ တွေ့လာခဲ့ရတော့တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘုရား အလောင်းမွေးဖွားပြီးပြီးချင်း အလောင်းတော်ရဲ့ မြင့်မြတ်လာမယ့် အနာဂတ်နိမိတ်ကို ပညာရှင် တော်တော် များများက ဖတ်ကြားကြတယ်။
ပထမဆုံးနိမိတ်ဖတ်သူက အသိတပါ။ သူက တောတောင်ထဲမှာနေတဲ့ ရသေ့တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဝင်အရ သူဟာ ဗြဟ္မာလို့အခိုင်အမာဆိုထားပေမယ့် သူဟာ အာရီးယန်းမျိုးဆက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခု ဘယ်လောက်အထိ ထပ်တူကျနေပြီလဲဆိုတာ ပြောနေတဲ့အချက်ပါ။
ဘီစီခြောက်ရာစုမှာ ဗြဟ္မဏတို့ကိုယ်တိုင်ကပင် တောထွက်ပြီး အိမ်ယာမထောင် ရသေ့ရဟန်းဘောင် ကို ယူနေကြပါပြီ။ စောစောပိုင်းကဆို ဒါမျိုးကိစ္စက ကြားပင်မကြားဖူးတဲ့ကိစ္စပါ။ ခဏကြာတော့ ၁၀၈- ပါးသော ဗြဟ္မဏတို့ကို သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားရဲ့ ကင်ပွန်းတပ်မင်္ဂလာအတွက် ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတော့တယ်။ သူတို့ဟာ အိမ်ယာထောင်မှုကို မစွန့်လွှတ်ပဲ အာရီးယန်းတွေကျင့်သုံးတဲ့ ဓလေ့၊ စရိုက်တွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ လေ့ကျင့်ကြတဲ့ ဗြဟ္မဏတွေပါ။
ဒီလိုကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခု ဘာကြောင့် တစ်သားတည်းဖြစ်သွားရတာလဲ။
အာရီးယန်းတွေရဲ့ နယ်ချဲ့မှုဟာ မြေပြန့်လွင်ပြင်ကိုရောက်တော့ အဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်။ လူမျိုးခြင်း ပေါင်းစည်းသွားတယ်။ အဲဒီနောက် လူမှုရေး၊ စီးပွါးရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးတွေ အပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့တော့တာပါပဲ။
အစပထမကတော့ လူဦးရေအများစုဟာ မြစ်ချောင်းတွေနားမှာနေပြီး သဘာဝအန္တရာယ်တွေရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေကို အလူးအလဲခံခဲ့ကြရတယ်။ ဒီသဘာဝတွေကိုပဲ အာရီးယန်းတို့က နတ်တွေကို ကိုယ်စားပြု တယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့ စီးပွါးရေးအချက်အခြာ ဖြစ်လာခြင်းသဘောပါ။ ကနဦး အာရီးယန်းတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ ရသေ့၊ ရဟန်း(သမဏ၊ ဗြဟ္မဏ) နဲ့ စစ်သား(ခတ္တိယ) တို့သာ လွှမ်းမိုးထားခဲ့တယ်။ ရသေ့၊ ရဟန်းက နတ်ဒေဝတာတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးတယ်။ စစ်သားက နီးစပ်ရာလူမျိုးစုတွေဆီသွားပြီး စစ်တိုက်တယ်။ ဒီတော့ နိုင်ငံမွဲတေလာမှာပေါ့။ အဲဒီကနေတဆင့် စီးပွါးရေးပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လာပြီး ကုန်သည်၊ ပွဲစားတွေ အရေးပါလာတော့တာပါ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ သာဝကဖြစ်တဲ့ အနာထပိဏ္ဏိကဆိုရင် ထင်ရှားတဲ့ သာဓကတစ်ခုပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လူမျိုးစုကွဲလေးတွေအားလုံး တစ်စုတစ်ဝေးတည်းဖြစ်လာတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဟာ လူမျိုးနဲ့မသတ်မှတ်တော့ပဲ၊ ပထဝီနယ်နိမိတ်နဲ့ သတ်မှတ်လာကြတယ်။ လူမျိုးစုကွဲတွေ စုပေါင်းနေထိုင် လာကြတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ သာဝကဖြစ်တဲ့ မဂဓတိုင်းသခင် ဘုရင်ဗိမ္ဗိသာရ မဂဓနိုင်ငံတော်ဟာ ဒီအတွက် ထင်ရှားတဲ့ သာဓကတစ်ခုပါပဲ။
စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဟာ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတို့ကျင့်သုံးတဲ့ ဘာသာရေးဓလေ့စရိုက်တွေကို အာရီးယန်းတွေ လက်ခံလာဖို့တွန်းပို့လိုက်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အာရီးယန်းတွေက အစပိုင်းမှာ ရုပ်ဝတ္တုတွေနဲ့ လွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောင်နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်လည်း ကြာရော အိန္ဒိယဟာ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေရဲ့ ဘာသာရေးအယူအဆ၊ အကျင့်တရားတွေနဲ့ လုံးဝကြီးလွှမ်းမိုး သွားပါတော့တယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေနဲ့ အာရီးယန်းတွေကြားက ခြားနားချက်ဆိုတာ ရှာမတွေ့တော့လောက်အောင် တသားတည်းဖြစ်သွားတော့တယ်။
ဒီသမိုင်းအထောက်အထားကိုကြည့်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာက ဗြဟ္မဏဘာသာကို ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့စကား လုံးဝအဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေယုံကြည်တဲ့၊ ကျင့်သုံးတဲ့ ဘာသာရေးအယူအဆ တော်တော် များများကို မွေးစားယူခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ တောထွက်ခြင်း၊ ကမ္မ၊ ဝိမုတ္တိ ဆိုတာတွေပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မပေါ်မီ ကတည်းက ဒါတွေရှိနေခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်လာတဲ့ နောက်မှာလည်း ဒါတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေပဲ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
သူသင်ပြမယ့်တရားတွေဟာ ရှေးဟောင်းတရားဖြစ်တယ်၊ ပန်းတိုင်ကလည်း ရှေးကရှိခဲ့တဲ့ ပန်းတိုင် (သူထွင်တာ မဟုတ်- တထာဂတကို ဘာသာပြန်သည်ဟုထင်- စာရေးသူ) သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ စကားဟာ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေရဲ့ အကျင့်ဟောင်း၊ ပန်းတိုင်ဟောင်းကိုပဲ အခြေခံတယ်လို့ မိန့်ဆိုဟန်ရှိပါတယ်။ (သမိုင်းကို လေ့လာရာမှာ ရှေးဘုရားရှင်တွေမပါဘူးဆိုတာလေး စိတ်ထဲမှာထားပြီး သဒ္ဓါတရားခိုင်ခိုင်နဲ့ ဖတ်ကြ စေချင်ပါတယ်)။
ဒါတင်မကပါဘူး။ ဂေါတမဗုဒ္ဓ မပွင့်ခင်ကတည်းက ရှေးရှေးဘုရားရှင်တွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်း သားတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာက ဆက်လက်ယုံကြည်စေခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာကိုလေ့လာရင်း ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေဟာ အနည်းနှင့်အများ ကူးလူး ဆက်ဆံနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အများစု လက်ခံခဲ့ပြီး အာရီးယန်းတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုအနည်းငယ်ကိုသာ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ နတ်ဒေဝတာတွေနဲ့ ပတ်သက် တာနဲ့ နိမိတ်ဖတ်တာစတဲ့ ဝေဒပညာတစ်ချို့လောက်ပါ။
ဟိန္ဒူတွေကတော့ အာရီးယန်းတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အများစုအခြေခံပြီး အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းသားတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အနည်းငယ်သာ လက်ခံခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဟိန္ဒူအများစုဟာ ဇာတ်စနစ်ရှိတယ်၊ ဝေဒရှိတယ်၊ နတ်ရှိတယ်၊ ယဇ်ပူဇော်မှုရှိတယ်။ ဒါတွေဟာ အာရီးယန်းတွေရဲ့ အကျင့်ဟောင်းတွေပါ။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒုသားတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုဖြစ်တဲ့ တောထွက်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ သံသရာ၊ ကမ္မ၊ ဝိမုတ္တိတို့ကိုလည်း နေရာတော့ပေးထားတာ တွေ့ရပြန်ပါတယ်။
in စာတိုပေစ - on 6/16/2012 - No comments
တာရာမင်းဝေကတော့ လူငယ်ဆန်ဆန် လူငယ်ကြိုက်ပဲ ပြောခဲ့တယ်။
"သိပ္ပံပညာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ တိုးတက် တိုးတက် ကွဲနေတဲ့ အသည်းကိုတော့ ပြန်ဆက်အောင် မစွမ်းနိုင်သေးပါဘူး" တဲ့။
သူကတော့ သိပ္ပံပညာကို သရော်သံ စွက်စွက်နဲ့ ကြည့်တယ်။
"သိပ္ပံပညာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ တိုးတက် တိုးတက် ရိုးရိုးလှေကားထက် စက်လှေကားက ပျက်တာ ပိုများတယ်" တဲ့။
၃။ ဂျော့ ဘားနတ်ရှော
သူကတော့ ပိုပြီးတောင် သရော်သံ စွက်နေပါသေးတယ်၊ သိပ္ပံပညာကို လူနဲ့ရောပြီးတောင် သရော်လိုက်သေးတယ်။
နွားနို့ညှစ်စက် တီထွင်နိုင်တဲ့ သူ့တပည့်တွေက သူ့ကို လာကြွားကြတယ်။
"ဆရာကြီး ဒီနေ့ကစလို့ လူကိုယ်တိုင် နွားနို့ညှစ်စရာမလိုတော့ဘူး၊ ကျနော်တို့ နွားနို့ညှစ်စက်ကို တီထွင်နိုင်ပြီ။"
"ဒါနဲ့ မင်းတို့စက်ကလူကို အစားထိုးတာလား၊ နွားမကို အစားထိုးတာလား"
"နွားမကိုရော အစားထိုးလို့ မရဘူးလား"
"ဟင် လူကိုတော့ စက်နဲ့အစားထိုးလို့ရတယ်၊ နွားမကိုတော့ မရဘူး၊ ဒါဆို လူက နွားမလောက်တောင် အသုံးမကျ၊ မရှိမဖြစ် မဟုတ်လို့ပေါ့ ကွာ" တဲ့။
ဆိုပါတော့ သိပ္ပံပညာက ကွဲနေတဲ့ အသည်းကို ပြန်ဆက်ပေးနိုင်တယ်၊ နွားမကိုလည်း စက်နဲ့ အစားထိုးပေးနိုင်တယ်။
ဒါဆိုရင် အသည်း နဲ့ နွားမက စက်လှေကားလို ခဏ ခဏ ပျက်သွားနိုင်တာပေါ့။
(ဇင်ဝေသော် ၊ ကမ်းလက်)
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/15/2012 - No comments
နှစ်နှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်သည်။ စင်ကာပူတစ်ကျွန်းလုံး အုံးအုံးကြွက်ကြွက် ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ အကြောင်းကား ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာတစ်ယောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အနှစ်သာရအဆုံးအမများဖြစ်ကြသည့် ကမ္မဝါဒ၊ သံသရာဝါဒ၊ နိဗ္ဗာန်နှင့်ပတ်သက်သည့် ဒေသနာတို့ကို သူ၏ပိုင်နက်တရားဟောခန်းမထဲ၌ ပျက်ရယ်ပြုလှောင်ပြောင်နေခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကြီးကား ပြောသတိ၊ ဆိုသတိ၊ ရေးသတိ အရေးကြီးလှပေသည်။
ထိုအတင်းတုပ်သော သင်းအုပ်ဆရာ၏ ဗွီဒီယိုများ ယူကျုပေါ်ရောက်သွားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏နှလုံးသားကို ထိရိုက်သွားလေတော့သည်။ ထို့နောက် အစိုးရပိုင်သတင်းစာမှာပင် အသံတွေဆူညံသွားလေတော့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာမက အခြားသောဘာသာဝင်များကလည်း သူတပါး၏ယုံကြည်လေးမြတ်မှုကို သရော်ရဲသော ထိုဆရာကို ဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ကြလေတော့သည်။ ထိုအခါရောက်မှ ထိုအတင်းတုပ်သင်းအုပ်ဆရာ ပါးစပ်ဗရိတ်အုပ်သွားလေတော့သည်။
ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အွန်လိုင်းပေါ်မှ တုံ့ပြန်ကြသူများတွင် စင်္ကာအမျိုးသားတက္ကသိုလ် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့မှ ကျောင်းသားများ အများစုပါဝင်ကြလေသည်။
ကြွားသည်ဟုမထင်လျှင် ပြောချင်၏။ သီဟနာဒကား ထိုစင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ်၏ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ Spiritual Adviser ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့မှ ကော်မတီများ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ရောက်လာပြီး သြဝါဒခံယူကြသည်။
အတင်းတုပ်သော သင်းအုပ်၏တော့ပစ်က ဟော့ဖြစ်နေသောကာလတည်း။ ကိုယ်တိုင်က သည်းခံတတ်သော အမျိုးအစားတွင်သိပ်မပါဝင်သော်လည်း Spiritual Adviser ဟူသော ခေါင်းစည်းကြီးအောက်၌ကား ထုကြကွာ၊ နှက်ကြကွာဟုကား သြဝါဒပေး၍မရချေ။ထို့ကြောင့် -
စာလာပေလာအတိုင်း (ကိုယ်တိုင်မလိုက်နာနိုင်သေးဆိုစေ) မြတ်စွာဘုရားကား သည်းခံ၏။ သည်းခံခြင်းကို တန်ဖိုးထား၏။ ချစ်သားတို့- ငါဘုရားကိုဖြစ်စေ၊ ငါ၏ ဒေသနာတော်တို့ကိုဖြစ်စေ၊ ရဟန်းသံဃာအဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်စေ ၊ မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲပုတ်ခတ်က စိတ်တိုစိတ်ပျက်ရန်မလို။ မဟုတ်က မဟုတ်ကြောင်း၊ ဟုတ်က ဟုတ်ကြောင်းသာ ရှင်းပြကြ၊ အစချီသော ခေါက်ရိုးကြိုး သြဝါဒကိုပေးမိ၏။
ထိုအခါ နှုတ်သွက်သော ကျောင်းသူလေးက “ဘန္တေ ၊ ဒါဆို ငုံ့ခံနေကြရတော့မှာလား” ဟုမေး၏။ မေးထိုက်ပါပေ၏။ သူတို့အားလုံးအမှန်ပင် နာကြည်းနေကြသည်။
ငုံ့ခံဟု မဆိုလို၊ ခပ်ပြုံးပြုံးတုံ့ပြန်ဟုသာ ဆိုလိုသည်။ ခပ်ပြုံးပြုံးတုံ့ပြန်ရန်ကား ချက်ချင်းမရ။ ကိုယ်က ပြုံးနိုင်မှ တုံ့ပြန်မှုကလည်း အပြုံးတုံ့ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ပြုံးရန်ကလည်း အီမိုးရှင်းနည်းမှ ဖြစ်မည်။ အချိန်ကိုစောင့်ပြီး ဒေါသသံမပါသော တုံ့ပြန်မှုများဖြင့် ထိုအတင်းတုပ်သင်းအုပ်ဆရာကို ပညာပေးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လူအထင်ကြီးပေလိမ့်မည်ဟု ဆက်ပြောရ၏။ ပညာတတ်ကလေးများဖြစ်သဖြင့် နားထောင်ကြ၏။ သဘောပေါက်ကြ၏။
မဟာယာနဖက်၊ တိဗက်တန်ဖက်၊ ဇင်ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်မှ ဆရာတော်များထံမှလည်း သြဝါဒတောင်းခံပြီးမှ တစ်ခုခုလုပ်ကြရန် အရေးကြီးသည်။ မဟာယာနဘက်မှ သြဝါဒကိုတော့ရပြီးဖြစ်၏။ အလွန်ကောင်းသော တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ယင်းကား စာအုပ်ပါးပါးလေးတစ်အုပ် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ရန်ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့ချုပ်(Buddhist Federation) က ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်သည်။ NUS, NTU နှင့် ပိုလီဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့တို့က ပံ့ပိုးမည်ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာသောအခါ NUS ကျောင်းသားဟောင်း၊ လတ်တလော လက်တွေ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ပြီး အတော်အတန်လူဖတ်များသည့် ဘာသာရေး ဘလော့ဂါတစ်ယောက် ရောက်လာပြန်သည်။ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)
ဘန္တေ ၊ ဒီကိစ္စကတော့ ပုဏ္ဏမထေရ်ရဲ့ထုံး နှလုံးမူလို့တော့ ရမယ်မထင်ဟု သူကပင်စကားစလေတော့၏။
ကြမ်းတမ်းသောဒေသသို့ သာသနာပြုကြွမည့် ပုဏ္ဏမထေရ်ကို ဘုရားရှင်က သတိပေးခြင်း အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ သူတို့က နှုတ်ကြမ်း၏၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာလိမ့်မည်ဟုမိန့်ရာ မထေရ်က ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှ မစော်ကားသေးဘဲဟု နှလုံးပိုက်ပါမည်ဟု ဖြေ၏။ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားလျှင်ရောဟု ဗုဒ္ဓကမေးပြန်ရာ မထေရ်က ငါ့အသက်ကိုမှ ရန်မရှာသေးဘဲဟု နှလုံးပိုက်ပါမည်ဟု ဖြေပြန်၏။ အသက်ကို ရန်ရှာလာလျှင်ကောဟု ဘုရားရှင်ကမေးပြန်ရာ မထေရ်က သေနေ့စေ့က သေရမည်။ ငါ့သေခြင်းအတွက် သူတို့က အကူအညီပင်ပေးသေးသည်ဟု နှလုံးသွင်းပါမည်ဟု ဖြေတော်မူ၏။ ထိုအခါမှသာ ဘုရားရှင်က ပုဏ္ဏမထေရ်ကို မီးစိမ်းပြလိုက်တော့သည်။
ထိုဒကာက ဤအဖြစ်အပျက်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်၏။
ထိုပုဏ္ဏမထေရ်ကား ကိလေသာဟူသမျှ ပရိုတွန်၊ နျူထရွန်ပင်မကျန်အောင် ပယ်သတ်ပြီးသော ရဟန္တာမထေရ်ကြီးတည်း။ ယခု မိမိတို့ကား ကိလေသာများ မူလအော်ရဂျင်နယ်အတိုင်း ရှိနေသေးသော ပုထုဇဉ်အရိုင်းတုံးကြီးများသာ။ ပုဏ္ဏမထေရ်လိုတော့ သည်းမခံနိုင်။ ဟန်လုပ်၍လည်း သည်းမခံ။
ယင်းဒကာက ထိုလှုပ်ရှားမှုကို စ၏။
အွန်လိုင်းက စ၏။ ပတ်ဗလစ်ရ်ှလည်းလုပ်၏။ Workshop တွေးလည်းလုပ်၏။ ယင်းစာအုပ်ကလေးကား Agree to Disagree ပင်ဖြစ်သည်။ မဖတ်ကြရသေးလျှင် ရှာ၍ဖတ်ကြည့်သင့်ပါ၏။ သိမ်မွေ့သော တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာလည်း အခြားဘာသာများအလယ် မျက်နှာထည်ပါ၏။
မည်သို့ဆိုစေ၊ ထိုအတင်းတုပ်သော သင်းအုပ်၏ပါးစပ်က ငြိမ်သွား၏။ ငြိမ်လည်း ငြိမ်ရပေမည်။ ဤကား စင်္ကာပူ၏ နိုင်ငံတော်မူဝါဒနှင့်ပင် မညီ။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်း၏။ သူ့အတွက်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွက်ရော ဝမ်းနည်းစရာတည်း။ အမှန်မူ ထိုဓမ္မဆရာကလည်း ပညာတတ်တစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သည်။
အတင်းတုပ်သော သင်းအုပ်ကားငြိမ်သွားပြီ။ သို့သော် အတင်းတုပ်မည့်သူကတော့ သင်းအုပ်ဆရာတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်တန်ရာ။ တစ်ချိန်ချိန်၍ ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် တစ်ယောက်ယောက်၊ တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပေါ်လာနိုင်သေး၏။
ထိုအခါ NUS က ကလေးများကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ သည်းခံခြင်းဟူသောဓါးအိမ်ထဲမှ သိုသိပ်စွာ မျက်ရှနေသော ဓါးကလေးများ အနာဂတ်တွင်လိုနေမည်ဖြစ်သည်။
ပုဏ္ဏမထေရ်ကဲ့သို့ ရဟန္တာတစ်ပါး၏ကျင့်စဉ်ကို ပုထုဇဉ်ရဟန်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာများက ဟန်ဆောင်၍လိုက်နေရန်မလို။ ဘာသာနှင့် ဒေသနာအတွက်လိုအပ်လျှင် ဓါးတစ်လက်ပင်ဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော် ထိုဓါးကို သည်းခံခြင်းဓါးအိမ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ထားသင့်သည်။ အရေးမကြီးဘဲ ဓားအိမ်ထဲမှ ထွက်မလာသင့်။ ။
လက်မဆေးခင် သန့်ရှင်းရေး အကုန်လုပ်သင့်ပြီ !
in Politics, ဇင်ဝေသော်, လှည့်ကြည့်မိတဲ့ ထောင့်ချိုးများ, ခေတ်သစ်ပုံပြင် - on 6/13/2012 - No comments
ဒီကိစ္စက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အစိတ်ကျော်ကျော်က စတင်ခဲ့ပြီး မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဘူးသီးတောင် မောင်းတော စစ်ဆင်ရေး အပြီး လူသူမရှိတဲ့ အဲဒီဒေသကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ အခြေချ နေနိုင်ဖို့ ဋ္ဌာန ဆိုင်ရာက ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
မအောင်မြင်တာက လူထုက ပြဿနာကို ခြေခြေ မြစ်မြစ် သဘောမပေါက်သလို အစိုးရဘက်က ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့် မြို့ပြတည်ထောင်ပေးမှု စနစ်မကျ၊ အဆင့်မမီတာလည်းပါတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေ အပါအဝင် မြန်မာတွေက အဲသလောက်ခေါင်တဲ့နေရာကို မနေလိုကြ၊ မနေနိုင်ကြဘူး။ အဲဒီ အချိန်ကတည်းက ရိုဟိန်ဂျာကိစ္စက စိုးရိမ်ရေမှတ်မှာ ရှိနေပါပြီ။
ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ယောက် ပြောတာကိုသတိရမိတယ်။ အစိုးရက ရွာတည်ထောင်ပေးတယ်၊ လုပ်ကိုင် စားသောက်ဖို့ အရင်းအနှီး ပေးတယ်။ သာသနာပြု ရဟန်းတော်တွေပါ ပူးတွဲလွှတ်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ အခြေတည်၊ အခြေကျအောင် မနေကြဘူး တဲ့။
သူ့အမြင်က တစ်ဖက်သက် နည်းနည်းဆန်တယ်။ အဓိက ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နဲ့ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်မပြေဘဲ ဘယ်သူမှ ရေရှည်နေနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီနေ့ ရိုဟိန်ဂျာက မနေ့က သီရိလင်္ကာက တမီးလ်တွေ ဖြစ်နေပြီ။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားထဲမပါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလည်း အသိအမှတ်မပြု၊ အိမ်မရှိတဲ့ လူမျိုးတွေ။ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် သယ်လာတော့မယ်။ သီရိလင်္ကာနဲ့ တမီးလ် ပြဿနာက ငြိမ်နေတာ၊ ပြီးသွားတာမဟုတ်သေးဘူး။ ဘာသာရေးဖက်က ကြည့်ရင် သီဟိုဠ်တွေရော မြန်မာတွေပါ စိတ်ပျော့ကြ၊ စိတ်နုကြတယ်။ သနား ကရုဏာစိတ် များတယ်။
လတ်တလော ကရုဏာက အနာဂတ် မျိုးဆက်ကို ပြည်တွင်းစစ် လက်ဆောင် ပေးခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာ သဘောမပေါက်ကြဘူး။ ဒီနေ့ ရအောင်မရှင်းရင် ရိုဟိန်ဂျာဟာ အနာဂတ်ပြည်တွင်းစစ် မီးပွားဘဲ။လူသားအချင်းချင်း စာနာထောက်ထားတယ် ဆိုစေဦးတော့ မြန်မာပြည်က သူတို့ကို လက်ခံသင့်တာက ရဖျူးဂျီး တွေအနေနဲ့ပါပဲ။နိုင်ငံရေး အရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စစ်ရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ် မညှာတမ်းရှင်းထားမှ ရလိမ့်မယ်။
ဘယ်လို ရှင်းရမလဲ ဆိုတာမသိရင် ဂျပန်နဲ့ ကိုရီးယားတုိ့ကို မေးရမယ်။ ဒီမိုကရေစီ ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်သွားရင် အကျိုးတကယ် ခံစားသွားကြရမှာက မြန်မာနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေမဟုတ်ဘဲ လူမျိုးခြားတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ လက် စင်အောင် မဆေးခင် ဒီအမှိုက်က အရင်ရှင်းထားမှရမယ်။
ရိုဟိန်ဂျာပြီးရင် ရှုပ်လာမဲ့ အမှိုက်ပုံက ဘိန်း အရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး ချမ်းသာ။ နိုင်ငံသား ကဒ်ပြားတွေ ငွေပေးဝယ်နေကြတဲ့ ဝ တွေ။ အတွင်းရေးမှုးတစ် ဦးခင်ညွန့် ရအောင်ယူခဲ့တဲ့ ပေါချောင်ကောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့။
စပါး စိုက်တဲ့ မြန်မာက ဘ်ိန်းစိုက်တဲ့ ဝ ကို စီးပွားရေးအရ ဘယ်နည်းနဲ့မှယှဉ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ ဝ ကို လေးခွနဲ့ မြန်မာက မနိုင်ဘူး။ ပါဂျဲရိုးပေါ်က ဝ ကို နွားလှည်း နဲ့ မြန်မာက မှီအောင် လိုက်လို့ မရဘူး။ ပြည်ပထွက် ငွေလာရှာတဲ့ မြန်မာတွေ ပြည်းတွင်းက ဝ တွေရဲ့ ကား၊ အိမ်၊ခြံ မြေ ဈေးကွက်ထဲ မတိုးနိုင်ဘူး။ တစ်လ ဒေါ်လာ ငါးထောင်ဆိုတဲ့ ဝင်ငွေမျိုးကို အကျင့်ပျက် အရာရှိနဲ့ ပေါင်းရှာရင် တစ်ရက် နှစ်ရက် အတွင်း ရှာလို့ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာပညာတတ်တွေဆုံး၊ မြို့တွင်းက မြန်မာတွေ မြို့ပြင် ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားကြရော။ ဘာသာရေး ရှုထောင့်က ကြည့်ရင် သူတို့ ပြဿနာက ရိုဟိန်ဂျာလောက်မကြီးဘူး။ သူတို့က ပိုကောင်း၊ ပိုချမ်းသာတဲ့ ဘဝကို လိုချင်တာ။ ဘာသာရေး အယူမသည်းဘူး၊ ကိုးကွယ်မှု ပြဿနာ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံသား မဟုတ်တာတော့ မဟုတ်တာပဲ။ ဒီကိစ္စကလည်း လက်မဆေးခင် ရှင်းထားမှရလိမ့်မယ်။
သူတို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေ အချင်းချင်း မညီမညွတ် ဖြစ်ရာက အချင်းချင်း သွေးကွဲနိုင်တယ်။ ရက်စက်ကောင်း ရက်စက်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ အမှိုက်ပုံ နှစ်ပုံ နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ တိကျတဲ့ ပေါ်လစီ ရှိမှကိုရလိမ့်မယ်။
လက်ကို စင်အောင် ဆေးပြီးရင်လည်း သန့်သန့်လေးနေမှ၊ နုိ့မို့ သိသာလွန်းတယ်။
အခုနေ လုပ်စရာတွေ လုပ်ထားလို့ရသေးတယ်။ လုပ် ပြီးတော့မှ လက်ဆေး၊ မောင့်ကျက်သရေ စွပ်။
Labels: Politics, ဇင်ဝေသော်, လှည့်ကြည့်မိတဲ့ ထောင့်ချိုးများ, ခေတ်သစ်ပုံပြင်
in စာတိုပေစ - on 6/12/2012 - No comments
မိတ်ဆွေရဟန်းတစ်ပါးနှင့်အတူ သူ၏ရဟန်းဒကာ၊ဒကာမများနေထိုင်ရာ တာမွေကို အလည်လိုက်ခဲ့ဖူးသည်။ အတန်ကြာ စကားပြောပြီးတဲ့နောက် ယင်း ရဟန်းဒကာသည် သောတာပန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း(သူ့ပြောစကားများအရ)သိလိုက်ရသည်။
ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က ပရစိတ္တဝိဇာနန ဉာဏ် ရနေပြီးသော ဒကာမကြီးကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေရရှာသော ရဟန်းများကဲ့သို့ဖြစ်ချိမ့်မည် ဟုတွေးမိကာ မိတ်ဆွေ ပုထုဇဉ်ရဟန်းအတွက် ( မလွယ်ကြောပဲ ) ဟုတွေးမိသည်။
ဆွမ်းစားပြီး မြို့ပတ်ရထားစီးပြန်ရန် ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုဒကာကြီးက ဘူတာကို လိုက်ပို့သည်။ ထိုစဉ် မြို့ပတ်ရထားကလည်း အလျင်အမြန်ရောက်လာသည်။
ဒကာကြီးက ရထားလွတ်မှာ စိုးရိမ်သည့်အတွက် ရဟန်းနှစ်ပါးကိုဖြည်းဖြည်းသာကြွလာခဲ့ကြရန် မှာထားခဲ့ပြီး လက်မှတ်ဖြတ်ရန် အမြန်ပြေးလေတော့သည်။ သူ့ရဟန်းက ခပ်နောက်နောက် တိုးတိုးလေးပြောသည်။
"သောတာပန် ဒကာက အပြေးတော့သန်သားဘဲ"
"အင်းလေ ရထားလွတ်မှာ စိုးရိမ်ရရင်တော့ သောတာပန်လည်း ခြေသွက်ရတော့တာပေါ့။
သူက အာပတ်သင့်စရာမှ မရှိတာပေပဲ"။
“ စားသုံးသူအကြိုက်…ဘာသာရေး(သို့) ရှော့ပင်းစင်တာဆန်လာသော ဘာသာရေးစင်တာများ” (၂)
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/11/2012 - 1 comment
ဤကိစ္စလည်း မဟာယာနက အလွန်ရှေးကျသည်။ အဓိကအားဖြင့် ပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်နေခြင်း၊ သင်္ကန်းချုပ်လုပ်မှု စည်းစနစ်၊ သင်္ကန်းအရောင်တို့ပင် ဖြစ်သည်။
ဘာသာရေး၌ မဟာယာနက ရီဗော်လူးရှင်းနစ်များ ဖြစ်ကြသည်။
ဤသင်္ကန်းအသွင်အပြင်နှင့် အရောင်ပြောင်းလဲမှုကတော့ အရင်အချက်တွေလောက် ထိရောက်မှုမရှိလှဟု ထင်သည်။ သူတို့အဆိုအရ အဝါရောင်သင်္ကန်းက ရဟန်းတစ်ပါးအတွက် တောက်ပလွန်းသည်။ ဘုရားရှင်ကလည်း လက်ကောက်ဝတ်တို့ကို ဖုံးလွှမ်းထားရမည်ဟု မိန့်သည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခါအပြင်ထွက်တိုင်းတစ်ခါ ပြင်ဆင်ဝတ်ရုံနေရခြင်းထက် အဆင်သင့်ချုပ်လုပ်ထားသော ဝတ်ရုံကို ဝတ်ဆင်ခြင်းက ပို၍ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်ရှိပြီး အချိန်ကုန်သက်သာသည်ဟု ယူဆကာ “တန်” မင်းဆက်ကတည်းက တရုတ်တို့ ပြောင်းလဲဝတ်ရုံခဲ့ကြသည်ဟု အဆိုရှိလေသည်။
သင်္ကန်းအသွင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထေရဝါဒအတွင်း၌လည်း ယခုကွဲပြားစပြုလာပြီ ဖြစ်သည်။ သီရိလင်္ကာမှ ရဟန်းတော်တစ်ချို့ ညာဖက်ပခုံးကို ဖုံးမိစေရန် အင်္ကျီလက်ရှည်များ စတင်ဝတ်ဆင်လာကြပြီ ဖြစ်သည်။ မြန်မာဆရာတော်အချို့လည်း ချမ်းအေးသော အနောက်နိုင်ငံများသို့ ရောက်သောအခါ ပို၍နွေးထွေးသော အနွေးထည်ထူထူများ စတင်ဝတ်ဆင်လာခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် သီရိလင်္ကာရဟန်းတော်တစ်ချို့ကား ချမ်းအေးသောကြောင့် မဟုတ်၊ အနောက်ယဉ်ကျေးမှု၌ ပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်နေက မယဉ်ကျေးသောသဘော ရှိတတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သင်္ကန်းအရောင်နှင့် ပတ်သက်၍ကား ပြောရပိုခက်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ် (၃၀) ကျော် (၄၀) ခန့်က အုတ်ခဲရောင်နှင့် ကြက်သွေးရောင်များသာ ခေတ်စားခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကြီးများက အုတ်ခဲရောင်ကို အများအားဖြင့် ဝတ်ရုံတော်မူကြပြီး ရဟန်းငယ်တို့က ကြက်သွေးရောင်လွင်လွင်ကို ဝတ်ရုံကြသည်။ ယနေ့ ထိုအရောင်များပင် သိပ်မတွေ့ရတော့။ အညိုရောင်များ လွှမ်းလျှက်ရှိတော့သည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာက မြန်မာရဟန်းတော်များ၏ သင်္ကန်းအရောင်ကို အညိုရောင်ဟု သိထားကြပြီဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်း အရောင်၏ ပြောင်းလဲသွားမှုပင်ဖြစ်သည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀- က သင်္ကန်းအရောင်သည် မည်သည့်အရောင် ဖြစ်လေမည်နည်း။ ပညာရှင်များ ဆုံးဖြတ်ရန်သာ ချန်ထားခဲ့ရပေဦးတော့မည်။
ထိုင်းကလည်း သူတို့သင်္ကန်းအရောင်သာ မှန်၏၊ ဝိနည်းတော်နှင့် ညီ၏ဟုကြ၏။ သီရိလင်္ကာကလည်း သူတို့အရောင်သာ မှန်၏ဟု ဆိုကြ၏။ မြန်မာတို့ကလည်း လက်လျှော့လိမ့်မည်မဟုတ်။ သို့သော် ထေရဝါဒထဲမှာပင် အရောင်ကိစ္စက ညှိုနှိုင်းမရတော့။
သင်္ကန်းအရောင်ကိစ္စက လူထုနှင့်တိုက်ရိုက်မပတ်သက်သော်လည်း ဝတ်ရုံပုံ၊ အင်္ကျီလက်ရှည်ခံပြီး ဝတ်ရုံခြင်းတို့က လူထု၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့များနှင့် ပတ်သက်လျှက်ရှိသည်။ လာမည့်နှစ်ငါးဆယ်အတွင်း ရဟန်းတော်တိုင်း ပခုံးမပေါ်အောင် အင်္ကျီများခံမဝတ်ဟု မည်သူအာမခံနိုင်ပါမည်နည်း။ အရေးတော့ မကြီးလှဟုထင်သည်။ သို့သော် ပြောင်းလဲမှုကတော့ ဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်ထင်သည်။
ယနေ့ခေတ် ရှော့ပင်းစင်တာများ၌ ကားတစ်စီးဝယ်လို့ရသလို ကန်စွန်းရွက်တစ်စီးလည်း ဝယ်လို့ရနိုင်သည်။ ရေမွှေးဘူးဝယ်လို့ရသလို အိမ်သာသုံးစက္ကူလည်း ဝယ်ယူနိုင်သည်။ တစ်နေရာထဲ၌ လိုသောပစ္စည်းများ အားလုံးရအောင် စီစဉ်ထားမှုကြောင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတို့အတွက် လွယ်ကူသက်သာစေ၊ အချိန်ကုန်မှု နည်းပါးစေသည်။ တိုးတက်လာသော စီးပွါးရေးအမြင်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ မဟာယာနစင်တာများလည်း ဤစနစ်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်သည်။
ဆရာတော်တစ်ပါးဖွင့်ထားသောကျောင်း၌ လိုအပ်သော ကိစ္စများ အကုန်ပြီးစီးအောင် စီမံထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘုရားရှိခိုး၍ ရသည်။ တရားထိုင်၍ ရသည်။ ဗိုက်ဆာလျှင် ကော်ဖီဆိုင်၊ ထမင်းဆိုင်ရှိသည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် ဆေးခန်းရှိသည်။ အလကားတော့မရပေ၊ တန်ရာတန်ကြေးကို အလှူငွေသဘောဖြင့် ပြန်ပေးရသည်။
ဤမြင်ကွင်းများနှင့် အသားမကျသေးသော မြန်မာတို့က ဘာသာရေးက စီးပွါးရေးဆန်သွားသည်ဟု မြင်ကြပေလိမ့်မည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် သူတို့မျက်စိထဲမှာလည်း ထေရဝါဒကျောင်းများ၌ ငွေကြေးကိစ္စသွယ်ဝိုက်၍ ပတ်သက်နေသည်တို့ကို (ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်နေ၍သာ သွယ်ဝိုက်၍ဟု သုံးလိုက်ရသည်) တွေ့ကြရသည်။
အထင်ရှားဆုံးသာဓကမှာ မင်္ဂလာဆောင်များ၊ မွေးနေ့ပွဲများ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲ၌ ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
အစပထမကတော့ သံဃာတော်တို့ကို ဆွမ်းကပ်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်ခဲ့ပုံရပါသည်။ ထို့နောက် ဖိတ်ကြားသောဧည့်သည်အနည်းငယ်ကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးလာကြသည်။ နောက်ပိုင်း၌မူ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖိတ်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပင် ဧည့်ခံကြတော့သည်။ စကားမှားသွားလျှင် ခွင့်လွှတ်ကြစေချင်ပါသည်။ ထိုဘုန်းကြီးကျောင်းများသည် ဟိုတယ်၊ ရက်စတောရင့်ရှိ ခန်းမများထဲသို့ တစစနေရာဝင်ယူလာပြီ ဖြစ်သည်။
ဟိုတယ်၊ ရက်စတောရင့်ငှားလျှင် ဈေးပိုကြီးသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းခန်းမ (ဓမ္မာရုံထဲမှာပင် တစ်ချို့က ဧည့်ခံကြသည်) က ဈေးချိုသည်။ ဟိုတယ်ကိုပေးရခြင်းက ကုသိုလ်ရသည်ဟုပြောရန် ခက်သော်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းခန်းမကိုသုံးပြီး သုံးခပေးလျှင် (လှူဒါန်းလျှင်ဟု ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးသုံးလိုက သုံးနိုင်ပါသည်) ကုသိုလ်ပါရနိုင်သည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ငွေကြေးကိစ္စ တနည်းမဟုတ် တနည်းပတ်သက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဇွတ်ငြင်း၍ မရတော့ပါ။
ဤဆောင်းပါးသည် ဝေဖန်ရေးဆောင်းပါး မဟုတ်သည့်အတွက် ဝေဖန်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ လူထုအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီး ဘာသာရေးပုံသဏ္ဍာန် မသိမသာမှ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာပုံကို ခြေရာခံခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်ဆိုစရာ ဘာမှမရှိပါ။ တင်းခံ၍လည်း မရပါ။
ဤကိစ္စ၌ ထေရဝါဒထဲမှာပင် ယဉ်ကျေးမှုမတူကြပေ။ သီရိလင်္ကာအများစုက ဓမ္မာရုံကို တော်တော်လေးစားကြသည်။ ဓမ္မာရုံထဲ၌ စားသောက်ခြင်း လုံးဝခွင့်မပြု၊ မြန်မာတို့က ဓမ္မာရုံထဲ ဆွမ်းကပ်ခြင်း၊ ဧည့်သည်များ ဧည့်ခံခြင်းကို တစ်စုံတစ်ရာ မခံစားကြရပေ။ ဤသည်မှာ ယဉ်ကျေးမှုသာဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးဟုပြောရန်ခက်ပါသည်။
ဘာသာရေးစင်တာထဲ၌ ဤသို့သော လူမှုရေးကိစ္စများ ပြုလုပ်ခြင်းကို မဟာယာနတို့က စတင်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ ထေရဝါဒထဲသို့ သိုသိုသိပ်သိပ်စိမ့်ဝင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ငြင်းဆန်သော ဆရာတော်များရှိမည်။ လက်ခံကျင့်သုံးသော ဆရာတော်များလည်း ရှိမည်။ သို့သော် နောင်တွင်လက်ခံသောရဟန်းတော်များ ပိုများလာမည်က သေချာပါသည်။
အချို့ ဘာသာရေးစင်တာများက ဤမျှဖြင့်ပင် မကတော့ပါ။ ယဉ်ကျေးမှုမတူသူအားလုံး တစ်နေရာထဲ၌ ကိုယ်ကိုးကွယ်သောဘုရားကို အလွယ်တကူကြည်ညို၍ရစေရန်ပင် စီမံပေးလာကြသည်။ ချဲ့ပါဦးအံ့။ ထိုစင်တာထဲ ဝင်သွားပြီဆိုလျှင် သင်ကိုးကွယ်ပူဇော်လိုသော ဘုရားဆင်းတု အစုံရှိလေသည်။
ထေရဝါဒတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် ထေရဝါဒဆင်းတုကို ပူဇော်ကန်တော့နိုင်သည်။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတို့အတွက် မြန်မာဆင်းတုရှိသည်။ သီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာတို့အတွက် သီရိလင်္ကာဘုရားဆင်းတုရှိသည်။ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက် မဟာယာနဆင်းတုတော် အစုံရှိလေသည်။ မလွယ်ကူပေဘူးလား။ ထိုစင်တာများက သင့်အလိုကျအောင် အားလုံးစီစဉ်ပေးထားလေသည်။
အမှန်ပင် စူပါမားကက်နှင့် တူပြီဖြစ်သည်။ One Stop. Get All You Need ဖြစ်ပေတော့သည်။
ထိုသို့သော စင်တာများ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေသည်။
သို့ဖြစ်လျှင် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှာရော ဤသို့ဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။ ပညာရှင်များ ဆွေးနွေးဖို့ ချန်ထားခဲ့ရပေဦးတော့မည်။ တရုတ်အများစုက ထောက်ပံ့နေလျှင် ကွမ်ရင်မယ်တော် ရုပ်တုကိုတော့ ထားရတော့မည့်သဘော ရှိနေပေလိမ့်မည်။ ကွမ်ရင် မရှိလျှင်သာ ရှိမည်၊ ဂြိုဟ်တိုင်၊ ဂြိုလ်ဘုရားများကတော့ ရှိနေတတ်သည်။ (၇) ရက်သားသမီးများ ကုသိုလ်ပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုဂြိုဟ်တိုင်ဘုရားများသည် လူထုလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားသည့် မားကက်တင်းသဘောသာဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေရာထဲ ကိစ္စပြီးသွားအောင် စီမံပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်တော့ ဒီကျောင်း၊ မွေးနံ့ဘုရားကို ဆွမ်းကပ်ဖို့ ဟိုကျောင်းဖြစ်စရာမလိုတော့ပေ။
ထိုထက် ခေတ်မှီသော မဟာယာနတစ်ချို့က အသုဘရှိလျှင်ပင် တစ်ချက်တည်းပြီးအောင် စီမံပေးကြသည်။
အသုဘကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်ရန်
သုသာန်သို့ကား ဘတ်(စ်) စသည် စီမံပေးရန်
ကာယကံရှင်က ဖြစ်လိုသောဆန္ဒကိုသာ ပြောဖို့လိုသည်။ ဘုန်းကြီးပင့်ရာတွင်ပင် ထေရဝါဒကို ပင့်လိုသလား၊ မဟာယာနကို ပင့်လိုသလား။ လိုတာရအောင် စီမံပေးကြသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများ တဖြည်းဖြည်း ခေတ်စားလာသည်။ လွယ်ကူသက်သာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လူသည် လွယ်ကူသက်သာသော စနစ်ကိုကြိုက်သည်။
ထို့ကြောင့် သင်မနှစ်သက်လျှင်ပင် ဤယဉ်ကျေးမှုက ကွယ်ပျောက်တော့မည် မဟုတ်ပေ။
ဆရာပူဇော်ပွဲနှင့် စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနား (ရန်ကုန် -၂၀၁၂)
in သတင်း - on 6/09/2012 - No comments
ကမ္ဘာ့တတိယလှိုင်းကဘယ်မှာလဲ! ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျ မသိဘူး ။
R.I.T ရဲ့တတိယ ၊ စတုတ္ထလှိုင်းတွေကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်
တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ ပထမ ၊ ဒုတိယမျိုးဆက် ဆရာ့ ဆရာတွေကို
တတိယ၊ စတုတ္ထမျိုးဆက်တွေက “ပူဇာစ ပူဇနေယျာနံ” ဖို့အတွက်…..
နေ့ရက်း၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ရက်
အချိန်းထပ်မံကြေငြာပေးပါမည်။
နေရားရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ယခင် ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်)၊ အင်းစိန်၊ ကြို့ကုန်း။
Website ~ www.sayapzpygn.com
Facebook ~ Saya Puzawpwe and Gathering of Engineering Alumni, Yangon 2012
“ စားသုံးသူအကြိုက်…ဘာသာရေး(သို့) ရှော့ပင်းစင်တာဆန်...
ပြည်ပ သာသနာပြု အစစ်
ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းဥပဒေသများ (သို့) ၀ိရောဓိ ကြက်ခြေ
= Break even =
ရွာအနောက်ခြမ်းက အသံများ (၁)